နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏မိန့်ခွန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏မိန့်ခွန်း
Posted by kai on Mar 3, 2012 in 2010/2012/2015 Election | 8 comments
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ မတ်လ ၁ရက်နေ့ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ
Friday, 02 March 2012 22:18
လေးစားအပ်ပါသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကကြီးနှင့်တကွ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား-
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၁၀ အရ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏မူဝါဒများ၊ တစ်နှစ်တာကာ လအတွင်း မိမိအစိုးရအဖွဲ့၏ဆောင် ရွက်ချက်များနဲ့ ရှေ့တွင်ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များအား လွှတ်တော်မှတဆင့်ပြည်သူများသိ ရှိစေရန်တက်ရောက်ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး မှာရှိတဲ့ မိဘပြည်သူများအားလုံး၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်ပ နိုင်ငံများမှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ ကျွန် တော်တို့ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံး၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကကြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြီးနဲ့ ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ် ၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်ဝကြပါစေ ကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာလွှဲပြောင်းရယူခဲ့တာ ဒီလဆိုရင် တစ်နှစ်တင်းတင်းပြည့် မြောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတစ်နှစ် ပြည့်အခါသမယမှာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများကတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာကို အပ်နှင်းထားခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူများ ကို ဦးထိပ်ထားပြီး ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆက်လက်ဆောင် ရွက်သွားမယ့်အစီအစဉ်များနဲ့ ပတ် သက်လို့ အကျဉ်းချုံးပြီး ရှင်းလင်း တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ဒီမိုက ရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလမ်းကြောင်း ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနဲ့အညီ အရှိန်အဟုန်နဲ့ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ ဒီကနေ့ ငြိမ်း ချမ်းစွာ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လမ်း ကြောင်းသစ်ကို စနစ်တကျ ကူးပြောင်းတည်ဆောက် နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာသတင်း မီဒီယာတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို Burma Spring” “Myanmar Spring” အစရှိတဲ့ အမည်နာမ အမျိုးမျိုးကင်ပွန်းတပ်ခံနေရတာကို လည်း ကျွန်တော်တို့သိရှိထားပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ တည် ငြိမ်မှန်ကန်တဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းမှု အပေါ် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ နားလည်မှုတွေ မြင့်မားလာနေပြီဖြစ် တဲ့အတွက် ယုံကြည်မှုတွေ ဆင့်ပွား ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြရဦးမှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ဗဟိုပြု ပြီး ဒီမိုကရေစီ ခေတ်သစ် စနစ်သစ် ကို ကူးပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ကျွန် တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ ထူးခြားချက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ စစ်မှန်ခိုင်မာတဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လောကပါလတရားများထွန်း ကားတဲ့ နိုင်ငံတော်သစ်တည်ဆောက် နိုင်ပြီလားလို့မေးရင် ကျွန်တော်တို့ အများကြီးကြိုးစားရဦးမှာပါ။ ကျွန် တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီး ခြေလှမ်းပေါင်း များစွားလျှောက်လှမ်းကြရဦးမှာပါ။ ဒါဟာလည်း ဒီမိုကရေစီ ပြည်သူ့ လူ့ဘောင်ကို တည်တံ့ခိုင်မာရှင်သန် အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြ ရမယ့် ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး တစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ် ပြည့်ကာလမှာ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့ အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာ တွေရှိသလို စိန်ခေါ်မှုတွေလည်း အများအပြား တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်က ကျွန်တော်ပြော ခဲ့သလိုပဲ ကျွန်တော်တို့အစိုးရအပေါ် သံသယရှိနေသူတွေ၊ မယုံမကြည် ဖြစ်နေသူတွေ ပြည်တွင်းမှာရော ၊ ပြည်ပမှာပါအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးလုပ်ဆောင် နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မိဘပြည်သူတွေဟာ ခေတ်အဆက် ဆက် အစိုးရစနစ်မျိုးစုံကို တွေ့ကြုံ ခံစားခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့လုပ်ဆောင် ချက်တွေ၊ ပကတိအခြေအနေမှန် တွေပေါ်ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့အစိုး ရဟာဘယ်လိုအစိုးရမျိုးဖြစ်တယ် ဆိုတာ အကဲဖြတ်ကြမှာဖြစ်သလို ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဆောင် ရွက်နေတာတွေဟာ နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အနာဂတ်သမိုင်း ကြောင်းအတွက်အထူးပဲအရေးကြီး လှတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်မှာ လျှောက် လှမ်းနေရတယ်ဆိုတာကို လည်း ကျွန်တော်တို့လေးလေးနက် နက် သိရှိနားလည်ခံယူထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာ နောင် လာမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်သလိုအနာဂတ် သားစဉ်မြေး ဆက်အတွက်လည်း သမိုင်းတွင် မယ့်စတင်ခြင်း အသစ်ဖြစ်လိမ့်မယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ခံယူထားပါ တယ်။ ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်မှု၊ ခိုင်မာမှု၊ ရေရှည်တည် တံ့မှုအပေါ်မူတည်ပြီး နောင်အစိုးရ အစဉ်အဆက် ကောင်းမွေ ဆိုးမွေ ခံစားကြရမယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့အလေးအနက်ခံယူ ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးဆိုတာမှာ ယခုလို ခေတ်တစ်ခေတ်ကနေခေတ်သစ်တစ်ဲရပ်ကို၊ စနစ်တစ်ခုကနေ စနစ်သစ် တစ်ခုကို ကူးပြောင်းနိုင်ရေးဆောင် ရွက်ရာမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ စနစ်တကျနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိမှုတို့ဟာ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ မျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာ့ရေးရာ အခြေအနေများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ်ဟာ မိဘ ပြည်သူများအတွက် တကယ့်ကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ ၊ စံနမူနာရေးကိုမျှော်မှန်းပြီး ဇန်န၀ါရီ လအတွင်းမှာ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြည်ပ နိုင်ငံတွေမှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ မြန် မာနိုင်ငံသားတွေကိုလည်း လမ်းဖွင့် ကြိုဆိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာနဲ့အညီ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာရောက်ရှိနေကြ တဲ့ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေဟာ လည်း တက်တက်ကြွကြွ စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်လာကြ တာကိုလည်း ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ရာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ရေးစနစ်ခိုင်မာရင့်သန်ဖို့ ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးမျိုး ဆက်သစ်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ မျိုး ဆက်သစ် မျိုးဆက်ဟောင်းတွေ အားလုံး Common Ground ရှာဖွေနိုင်ပြီး စုပေါင်းစွမ်းအားနဲ့ နိုင်ငံ တည်ဆောက်သွားနိုင်ရေးဟာ နိုင်ငံ တော်နဲ့ နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်လျက် ရှိနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လျှောက်လှမ်းနေ တဲ့ All Inclusive Political Process မှာ ခေတ်အဆက်ဆက် ကအခွင့်အရေးတွေ တောင်းဆိုနေ ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုင်းရင်း သားတွေ ပါဝင်နိုင်ဖို့ အရေးအကြီး ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်နိုင် ငံ ဖြစ်တာနဲ့အညီ ဒီနိုင်ငံရေးလုပ် ငန်းစဉ်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေအား လုံး တန်းတူရည်တူ ပါဝင်ခွင့်ရရှိဖို့ မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ သွေးရင်းညီအစ်ကို တိုင်းရင်းသား တွေရဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် အကောင်အထည်မပေါ်ခဲ့ရတဲ့ အိပ် မက်၊ လွင့်ပြယ်ပျောက်ပျက်ခဲ့ရတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကင်းဝေးပြီး အထင်အမြင်လွဲမှားခဲ့တာတွေ ကျွန် တော်တို့အစိုးရလက်ထက်မှာ အဆုံး သတ်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ကချင် ၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများနည်းတူ ဗမာဆိုတာဟာလည်း ပြည်ထောင် စုကြီးထဲက တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တစ်စုဖြစ်ပါတယ်။ သာတူညီမျှ အခွင့်အရေးကိုအားလုံးမျှဝေရရှိကြ ဖို့၊ တန်းတူရည်တူ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ မျှော်မှန်း ချက်ဟာ ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ ရဲ့ လိုလားချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အလျဉ်းသင့်လို့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦး မကြာသေးခင်ကပြောသွားတဲ့ စကားလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ၁၈ နှစ် ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ လက် နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေ ကပြောကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း လက်ပ်တော့ တွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေ ကိုင်ချင်တယ် ဆိုတဲ့စကား။ ကျွန်တော်တကယ့်ကို ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ကျွန် တော်အခိုင်အမာ သန္နိဋ္ဌာန်ချထား ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရလက် ထက်မှာ ဒီလိုမယုံမရဲဖြစ်နေတဲ့ စိုး ရွံ့မှုတွေ မပျောက်ပျောက်အောင် ဖျောက်ပစ်ရပါမယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ ခံယူချက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေ ခံစားနေကြရတဲ့ ခါးသီးတဲ့ ဒဏ်ရာ တွေ၊ စူးနစ်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အိပ်မက်တွေ၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြည့်ဆည်းပေး ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် သမိုင်းပေးတာဝန်ကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီတာဝန်ကြီးဟာ ကျွန်တော် တို့အတွက် ခက်ခဲကြီးလေးတဲ့ တာ ၀န်ကြီးတစ်ရပ် ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို လည်း ကျွန်တော်တို့ သိရှိနားလည် ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတာဝန် ကြီးကို ကျားကုတ်ကျားခဲ တာဝန် ယူဆောင်ရွက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ ယုံကြည်ချက်အပြည့်အ၀ရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင် တိုင်းရင်းသားခေါင်း ဆောင်တွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတဲ့ အခါမှာ ဒီယုံကြည်ချက်ဟာ ပိုပိုပြီး တော့ ခိုင်မာလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်ပေါင်းစည်းညီ ညွတ်ရေးမှာ ယုံကြည်မှုဟာ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျွန် တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင်ကို လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ခရီးလမ်းမှာ ကျွန်တော်တို့ မာယာတွေ၊ ဗျူဟာတွေ၊ ပရိယာယ်တွေမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကို အခြေခံတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ပဲဆောင်ရွက် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်တိုင်းရင်း သားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပမှာမေးမြန်းနေကြတာ တွေရှိပါတယ်။ မိဘပြည်သူတွေက လည်းသိချင်နေကြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တပ်မတော်ကို မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်ရုံကလွဲပြီး ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားထားပြီးတဲ့ အနေအထားမှာ ဘာဖြစ်လို့ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ မရပ်သေးတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင် လက်အောက်ခံတပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့တွေ ကို ဆက်လက်ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်မှာ အမိန့် နဲ့ညွှန်ကြားချက်ဟာ အသက်သွေး ကြောဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မပြီးပြတ် သေးတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် လက်ညှိုးထိုး အပြစ်တင်နေရုံနဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် မှုတွေ ရပ်စဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့ အတွက် ပထမဦးဆုံး နှစ်ဦး နှစ်ဖက် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရပ်စဲဖို့လို ပါတယ်။ ဒီအတွက် ပစ်ခတ်တိုက် ခိုက်မှုတွေ ရပ်စဲကြမယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်မာ တဲ့အာမခံချက် ၊ကတိက၀တ်တွေ အပြန်အလှန်ထားရှိဖို့လိုပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ဟာ ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ ကချင် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ တာဝန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ စစ်ဘေးသင့် တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ထောက် ပံ့ကူညီမှုတွေ၊ ပြန်လည်နေရာချထား ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေ သလို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပနဲ့ နိုင်ငံ တကာအဖွဲ့အစည်းတွေက ပံ့ပိုးကူ ညီနိုင်အောင်လည်း လမ်းဖွင့်ဆောင် ရွက်ပေးနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး အတွက် အဆင့် ၃ ဆင့်ချမှတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအဆင့်ဟာ ပြည်နယ်အဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ်အဆင့်မှာ နှစ်ဖက်ရန်လိုမှု တွေနဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရပ် စဲဖို့၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းသဘော တူထားတဲ့ နယ်မြေများမှာပဲ နေထိုင် ကြဖို့ ၊ ယင်းသတ်မှတ်နေရာများမှ အပ ကျန်နေရာဒေသများသို့ သွားရောက်ရာတွင် လက်နက်ကိုင် ဆောင်ခြင်းမပြုဘဲ သွားလာဖို့၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းသဘောတူထား သည့်နေရာများမှာ ဆက်ဆံရေးရုံး တွေ ဖွင့်လှစ်ထားရှိဖို့၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မယ့်နေရာ၊ိ်အချိန်၊ နေ့ရက်တွေ ညှိနှိုင်းသတ် မှတ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ မပါသေးပါဘူး။ ဒီအဆင့်ကို ပြီး မြောက်အောင်မြင်ဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ်လိုလားတဲ့ စိတ်ရင်း စေတနာပဲ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရပ်စဲပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူလိုက်တဲ့ အနေအထားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအဆင့်ကတော့ ပြည် ထောင်စုအဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ဆွေးနွေးရမယ့် အချက် တွေကတော့ ပြည်ထောင်စုကနေ ဘယ်တော့မှ ခွဲမထွက်ဖို့ ၊ ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါးကို လက်ခံဖို့၊ စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် နှစ်ဖက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့ဆေး ၀ါးများတိုက်ဖျက်ရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ ထူထောင်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ် တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့၊ လွှတ်တော် တွင်းရောက်ရှိလာလျှင် အခြားသော တိုင်းရင်းသားများနှင့် အကြေအလည်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနဲ့အညီ တစ်ခုတည်းသော လက်နက်ကိုင် တပ်မတော်အဖြစ် ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ဖို့ စတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီအချက်တွေကို နှစ်ဦး နှစ် ဖက်ညှိနှိုင်းပြီး သဘောတူညီမှုရရှိ ပြီဆိုရင် တတိယအဆင့်ကို ဆက် လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တတိယအဆင့်မှာတော့ နိုင်ငံ တော်အစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်း ဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ နိုင်ငံ ရေး အင်အားစုတွေ၊ ပြည်သူ့ကိုယ် စားလှယ်တွေ စတဲ့ နိုင်ငံတော်မှာ ရှိတဲ့ အဓိကကျတဲ့ Political Player အားလုံးပါဝင်တဲ့ဤလွှတ် တော်ကြီးမှာ သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလွှတ် တော်ကြီးအတွင်းမှာပဲ ထာဝရငြိမ်း ချမ်းရေးကို မဖြစ်မနေ ဆောင်ကြဉ်း မယ့် သန္နိဋ္ဌာန်ကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ စိုက် ထူကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင် ကိုတက်လှမ်းကြရာမှာ နိုင်ငံတော် လည်းပန်းတိုင်ရောက် ၊ တိုင်းရင်း သားတွေလည်း ပန်းတိုင်ရောက် ၊ နိုင်ငံသားအားလုံးလည်း ပန်းတိုင် ရောက်စေဖို့ အပြန်အလှန်နားလည် ယုံကြည်မှု၊ တန်းတူရည်တူရှိမှု ၊ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတဲ့ ဒေါက်တိုင်ကြီး သုံးရပ်နဲ့ တည်ဆောက်သွားကြရ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို အများဆန္ဒနဲ့ သဘောတူ ပြင်ဆင်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ လိုလားချက် တွေ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်သွားကြ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဆင့် ၃ ဆင့်ဟာ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မယ့် နိုင်ငံ တော်ရဲ့ လမ်းပြမြေပုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလမ်းပြမြေပုံကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေ၊ စက်မှု ဇုံတွေ၊ ပြန်လည်နေရာချထားပေးမှု နဲ့ ပြန်လည်ထူထောင် တည်ဆောက် မှုတွေ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေးစတဲ့ လူမှုအဆောက်အအုံတွေ ၊ စတဲ့ နည်းဗျူဟာများစွာပါဝင်နေမှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး အရိပ်အာဝါသအောက်ကိုရောက်ရှိ လာတဲ့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသား တွေ သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်နိုင်တဲ့အထိ ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့အတူ တိုင်း ရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် တွေ၊ အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွား ကြဖို့ လိုပါတယ်။ သေနတ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားလူငယ် တွေ လက်ပ်တော့ကိုင်ပြီး ထည်ထည်ဝါ၀ါ ရပ်တည်နေထိုင် နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီိလို ကြိုးပမ်းတဲ့ နေရာမှာ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ၊ထောက် ပံ့ကူညီမှုတွေ ဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုပြီး ဘက်စုံ ထောင့်စုံ ဖြည့်ဆည်းနိုင် အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရ ရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တဲ့ တန်းတူညီမျှရေး နဲ့အညီ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်း တစ်ရာကျော်မှီတင်းနေထိုင်တဲ့ ကျွန် တော်တို့ပြည်ထောင်စုကြီးဟာ ဒီ Diversity ကြန်အင်လက္ခဏာတွေ ကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ မြှင့်တင်ပေး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာ ပြည် သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက် လိုက်တဲ့ ပြည့်သူ့အကျိုးထမ်းဆောင် ရမယ့် ပြည်သူ့အစိုးရ ဖြစ်တာနဲ့ အညီ မိဘပြည်သူအားလုံးလိုလား တောင့်တနေခဲ့တဲ့ အမျိုးသား ပြန် လည် ပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်ကြီးကို ကျွန်တော် တို့အားသွန်ခွန်စိုက်ဆောင်ရွက်နေ ပါတယ်။ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ မည် သည့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့တိုက်တွန်းမှု ၊ ဖိအားပေးမှုကြောင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ကျွန်တော် တို့အစိုးရက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အတူ အရေးကြီးတဲ့ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း စဉ်ကတော့ မြန်မာ့စီးပွားရေး အမြန် ဆုံးဦးမော့လာရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘပြည်သူအားလုံးရဲ့ ဒုတိယဆန္ဒ ကတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို စီးပွားရေးကောင်းမွန်ပြီး ခေတ်မီ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံကြီး ဖြစ်လာ စေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရလက်ထက်မှာ နိုင်ငံတော် အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ် ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်ပေါ် လာအောင် မက်ခရို စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ရေတိုရေ ရှည်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ချမှတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အခြေအနေမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသေးတ၊ဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေ ဖယ်ရှားခြင်းမရှိသေးတဲ့ ပြည်တွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ခိုင်မာ အားကောင်းပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိ သေးတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံသားတွေ စီး ပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ကြ ရာ မှာအဆင်ပြေလွယ်ကူစေဖို့ ဦးတည် ချက်ထားပြီး လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေ ၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်တွေ ၊ လျင် လျင်မြန်မြန်ရရှိလာအောင် အလေး ထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ပို့ကုန် နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွန်အကောက်တွေ ကိုလည်း လျှော့ချဖယ်ရှား ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ခေတ်စနစ်နဲ့မကိုက်ညီ တော့တဲ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှု နှုန်းထားကိုလည်း ပြင်ပအခြေအနေ နဲ့အညီ ယာယီပြောင်းလဲသတ်မှတ် ပေးခဲ့သလို တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တည်ငြိမ်မှန်ကန်ပြီး နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို မထိခိုက်စေတဲ့ ငွေ လဲလှယ်မှု နှုန်းထားတစ်ရပ် ရေရှည် ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ထောင်နိုင်အောင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပညာရှင်များ ၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း များနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ပြီးဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ အပိုကုန်ကျစရိတ်တွေ လျော့နည်းသက်သာစေအောင်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားရဲ့ အတားအဆီးတွေကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့ ရာမှာ ဆန်စပါးလွတ်လပ်စွာတင်ပို့ ခွင့်၊ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း၊ တယ်လီ ဖုန်းဈေးနှုန်း ၊ မော်တော်ကားဈေး နှုန်းတွေ သိသိသာသာကျဆင်းသွား အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်ပြီးလည်း Transaction Cost တွေ လျော့နည်းကျ ဆင်းသွားအောင် ဆောင်ရွက်နေပါ တယ်။ လက်ရှိပြည်သူများကြားမှာ စိတ်ဝင်စားမှု အထူးပဲမြင့်တက်နေတဲ့ ငါးထောင်တန်မိုဘိုင်းဖုန်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ပြည်သူ့ဆန္ဒ၊ လိုလားချက်များနဲ့အညီ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများရှာပြီး ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေး ယန္တရားစနစ် တွေ ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်ပေါ်လာအောင် လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲ ဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စကတွေ လျော့နည်းစေရေးအတွက်လည်း ရေရှည်ကာလမှာ မော်တော်ကားဈေး နှုန်းတွေကို နိုင်ငံတကာနည်းတူ လျောကျလာအောင်ဆောင်ရွက်သွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ ပုဂ္ဂလိ ကလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ပေးနေ သလို နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ် ငန်းများကိုလည်း စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားလာအောင် ဖွဲ့စည်းတည် ဆောက်မှုအပြောင်းအလဲတွေ ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းအနှီးဈေးကွက်၊ ငွေကြေးဈေး ကွက်ထွန်းကားရှင်သန်လာအောင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်း ပြီး ပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်သလို အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေ တိုးပွားရှင်သန်လာအောင်လည်း ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂ လိကဘဏ်တွေခိုင်မာအားကောင်း လာအောင် မြှင့်တင်ပျိုးထောင်ပေး နေသလို အသေးစားနဲ့ အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေအရင်းအနှီး၊ နည်းပညာ တိုးမြင့်ရရှိရေးအတွက် လည်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ပြည်သူ့ရေးရာ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တွေမှာ လက်ဝါးကြီးအုပ် ခြယ်လှယ် ချုပ်ကိုင်ထားတာတွေ၊ လျော့နည်း ကျဆင်းသွားပြီး နိုင်ငံသားတိုင်း လက်လှမ်းမီ ရယူသုံးစွဲသွားနိုင်စေ ရေးအတွက် ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြောင်းလဲရာမှာလည်းလူတစ်စုလက် ၀ယ်သို့မရောက်ရှိစေဖို့၊ မညီမျှမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေဖို့၊ စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှု ကို အဟန့်အတားမဖြစ်စေဖို့ အဖက် ဖက်က သုံးသပ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေ ပါတယ်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေ ထွန်းကားရှင်သန်လာအောင် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းတွေထူထောင် လုပ်ကိုင်ရလွယ်ကူပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင် စွမ်းတိုးတက်မြင့်မားစေမယ့် စီမံကိန်းတွေကိုလည်း ချမှတ်ဆောင် ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး နယ်ပယ်မှာ ပြည်တွင်းပြည်ပ တတ် သိပညာရှင်များရဲ့ တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ အကြံဥာဏ်တွေကို အလေးအနက် ထားပြီး ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရဲ့ လုပ်ကိုင် နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးနေပြီ ဖြစ် ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရရဲ့ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာ ဗျူဟာကတော့ လူတန်းစားတစ်ခု တည်း၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုတည်း တိုးတက်ကြီးပွားစေရေးမဟုတ်ဘဲ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဆင့်အထိ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရာမှာ ခေတ်အဆက်ဆက် စူးဝင်နေတဲ့ ဆူးချွန်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ခိုင်မာတဲ့ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေနဲ့ ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်း လုပ်ငန်းစဉ်ပီပြင်ခိုင်မာလာတာနဲ့အမျှ အဂတိလိုက်စားမှုတွေ သိသိသာသာ လျော့နည်းပပျောက်သွားစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆော်ကမှုကို အချိန်ယူပြီးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိနိုင်ငံတော်ရဲ့ ငွေကြေးအခြေအနေ၊ ပြည်ပကြွေးမြီ၊ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ စတဲ့ မက်ခရိုစီးပွားရေးအခြေအနေအရပ်ရပ်ပေါ်မူတည်ပြီး အခြေအနေအချိန်အခါ သင့်ရင်သင့်သလို လစာ၊ စားရိတ်တွေကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ဟာ စတင်လွှဲပြောင်းရယူချိန်ကစပြီး မြင့်မား တဲ့လစားနှုန်းထားတွေကို ရယူခံစားခြင်းမပြုဘဲ ယခင်အစိုးရလက်ထက်က နှုန်းထားအတိုင်း ရယူခံစားနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ လူတန်းစားကွာဟချက်တွေ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တွေ ကြီးကြီးမားမားတည်ရှိနေသေးပြီး ပြည်သူတစ်ဦးချင်း ၀င်ငွေနိမ့်ကျနေသေးတဲ့ ဒီကနေ့ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာနဲ့အညီ ပြည်သူ့ရေးရာ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို အပြည့်အ၀ဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်၊ မိမိတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ အပိုကုန်ကျစရိတ်တွေ လျော့နည်းပပျောက်သွားအောင် စိတ်ရင်းစေတနာအရင်းခံပြီး ထမ်း ဆောင်သွားကြဖို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အစိုးရ၀န်ထမ်းအရေအတွက်ဟာ စုစုပေါင်း တစ်နိုင်ငံလုံးလူဦးရေရဲ့ ၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြည်သူ့အစိုရဖြစ်တာနဲ့အညီ အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်သော သာမန်လက်လုပ်လက်စားပြည်သူ ၉၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုလည်း ပြန်လည်ငဲ့ကွက်ဖို့လိုပါ တယ်။ အခုဆိုရင် လစာတိုးပေးရေးဆွေးနွေးမှုတွေကြောင့် အရပ်ရပ်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ရုတ်တရက် တက်လာတာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ၀န်ထမ်းတွေ လစာတိုးမြှင့်ပေးလိုက်လို့ ခံစားရမယ့် အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ ၅၈ သန်းသော ပြည်သူတွေဟာ ဒိနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် ယန္တရားတစ်ရပ်တည်းကိုပဲ အလေးပေးစဉ်းစားလို့မဖြစ်တဲ့အခြေအနေမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လစာ သို့မဟုတ် ထောက်ပံကူညီမှုတွေ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ခြုံငုံစဉ်းစားဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အစိုးရ နိုင်ငံတော်တာဝန် စတင်ရယူချိန်ကစပြီး ကျေးလက်ဒေသမှာရှိတဲ့ မိဘပြည်သူတွေ၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာရှိတဲ့ မိဘပြည်သူတွေအတွက် ဦးစားပေးအဆင့် အမြင့်ဆုံး ချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒီတာဝန်ဟာ ပါးစပ်က ပြောသလောက် မလွယ်ကူဘဲ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ ကြီးမားတဲ့အတွက် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ နည်းလမ်းအသစ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးဆောင်ရွက်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုတာ ရေတိုကာလအတွင်း လျင်လျင်မြန်မြန်မ တိုက်ဖျက်သွားနိုင်ဖို့ မလွယ်ကူမှန်း သိပေမယ့်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ မိဘပြည်သူတွေအတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ၊ ကျန်းမာရေး။ လူမှုဖူလုံရေးစတဲ့ လူသားဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အညီ နေထိုင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိ၊ NGO၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အကူအညီကိုရယူပြီး ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ထောင်စုနှစ်ရည်မှန်းချက်များနဲ့အညီ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ (၂၆%)ရှိနေတဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းထားကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရောက်ရင် (၁၆%)အထိ လျှော့ချနိုင်ဖို့၊ အဆင်းရဲဆုံး LDC နိုင်ငံဘ၀က ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ (၂၆%)သော ပြည်သူများအခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးယူနီဗာဆယ်ကျန်းမာရေး အာမခံစနစ်သစ်တစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာဖို့လည်း ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လယ်ယာကဏ္ဍ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ပေါများလာအောင်လည်း ဒေသအနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ ထွန်းကားလာအောင် အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတွေမှာ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းတွေမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်ပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အရ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့လာမယ့် တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ်ကိုလည်း ခြုံငုံချိတ်ဆက်ပါဝင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ရေတိုကာကလမှာ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွန်အခတွေ တိုးမြှင့်ရရှိလာအောင် ဆောင်ရွက်ရာမှာ မိဘပြည်သူများရဲ့ လူမှု-စီးပါားရေးဘ၀များကို မထိခိုက်စေအောင် အဘက်ဘက်မှ ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေသလို နိုင်ငံတော်ရဲ့ ယိုပေါက်၊ ဟာပေါက်တွေ ပိတ်နိုင်အောင်လည်း ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ ထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက်နေ ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှည်ကာလမှာတော့ ညီမျှမှု Equality နဲ့ မျှတမှု Fairness ဆိုတဲ့ အနေအထား(၂)ရပ်ကြားမှာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမယ့် အခွန်ဥပဒေ တစ်ရပ်ကို ခေတ်စနစ်နဲ့သာမက မိဘပြည်သူများရဲ့ ပကတိခြေအနေမှန်နဲ့အညီ တစ်ဦးချင်း ၀င်ငွေနိမ့်ကျတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရအောင် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတအပါအ၀င် နိုင်ငံသားအားလုံး အခွန်ပေးဆောင်ရေးကို ဦးတည်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိနိုင်အောင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်နံတစ်လျားမှာ စက်မှုဇုန်တွေထူထောင်တည်ဆောကနေပြီဖြစ် ပါတယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အရှိန်အဟုန်နဲ့ စီးဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သလို ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာအကာအကွယ်ပေးနိုင်အောင် လည်း ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင်ကိုတည်ဆောက်ရာမှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ထူထောင်တည်ဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာရေးနဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးမော့လာရေးအတွက် အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဟန်ချက်ညီညီဖော်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တွေ၊ စာသင်ကျောင်းတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ ခေတ်စနစ်နဲ့ညီတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကိုသာမက စီမံခန့်ခွဲမှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုပါ ဒွန်တွဲဆောင်ရွက် နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်တိုင်းဟာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာရှိနေမှာဖြစ်သော်လည်း တစ်ချိန်မှာ မိမိတက္ကသိုလ်နဲ့ မိမိအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတိုင်းမှာ စာကြည့်တိုက်တွေရှိရမှာဖြစ်သလို ကောလိပ်၊တက္ကသိုလ်တွေ အားလုံးမှာလည်း သမားရိုးကျစာကြည့်တိုက်တွေသာမက နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်တွေရှိအောင် ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသိပညာအခြေခံတဲ့ စီးပွားရေးစနစ်ကို မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်ကြီးတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဆရာဆရာမများကို အရည်အချင်းကို မြှင့်တင်ပေးရမှာဖြစ်သလို စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အရည်အသွေးကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြက်မြှင့်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါ တယ်။ နည်းပညာခေတ်၊ ပညာခေတ်မှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ နောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ Digital Divide ကို လျော့နည်းပပျောက်စေရန်လည်း အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှုတွေ၊ လက်တွေ့အသုံးချမှု Telecommunication ကွန်ရက်တွေ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လာမယ့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာ ယခင်ကထက် လေးဆတိုးမြှင့်သုံးစွဲပြီး ပညာရေးကဏ္ဍမှာ ယခင်ကထက် နှစ်ဆတိုးမြှင့်သုံးစွဲထားဖို့ လျာထားနေတာကိုလည်း တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အခြေခံခိုင်မာလာပြီး နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေတိုးတက်မြင့်မားလာတာနဲ့အမျှ ရေမြင့်ကြာတင့်ဆိုသလို လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပိုမိုအားပေးမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အစိုးရလက်ထက်မှာ သဘာဝအရင်းအမြစ်ထုတ်ယူရေးကို အခြေခံတဲ့ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ နေရာမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို အခြေခံတဲ့ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အစားထိုးဝင်ရောက်လာအောင် မူဝါဒအသစ်များချမှတ်ပြီး ပြည်တွင်း ပြည်ပတတ်သိပညာရှင်တွေရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ မက်ခရိုစီးပွားရေးခိုင်မာကောင်းမွန်အောင် တစ်ဖက်ကတည်ဆောက်နေသလို တစ်ဖက်ကလည်း အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ၊ လူသားအရင်းအမြစ်၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ နည်းပညာမြှင့်တင်ရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ တရားဥပဒေအခြေခံဖွံ့စည်းတည်ဆောက်မှု၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်၊ ပုဂ္ဂလိကပါဝင်မှု အချိုးအစားမြှင့်တင်ရေးအစရှိတဲ့ ဘက်စုံလွှမ်းခြုံပါဝင်တဲ့ အစီအမံများကို ရေတိုရေရှည်ချမှတ် ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံ့အသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ နိုင်ငံတော်သစ်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံး လိုက်ပါမြင့်တက်လာရေးစတဲ့ တာဝန်ကြီးသုံးရပ်ကို တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ဆောင်ရွက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အစိုးရမျှော်မှန်းတဲ့ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ Environmentally Sustainable ဖြစ်ရပါမယ်။ Socially Sustainable ဖြစ်ရမယ်။ Economically Sustainable ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံမူဝါဒကြီးသုံးရပ် ချမှတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရော၊ ပြည်ပထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုပါ ထိထိရောက်ရောက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့လည်း တံခါးဖွင့်ပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ထောက်ပံ့ကူညီမှု တစ်ဒေါ်လာပြုလုပ်တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရှင်သန်ခိုင်မာရေး၊ မြန်မာပြည်သူများရဲ့ အကျိုးစီးပွားတိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် တစ်ဒေါ်လာထည့်ဝင်ရာရောက်တဲ့အတွက် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းစ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ နောက်ပြန်လန်မကျသွားစေဖို့ အခြေအနေမှန်များကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသိမြင် နားလည်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အရေးကြီးဆုံးကတော့ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း ခိုင်မာအားကောင်းလာရေးပဲဖြစ် ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဟာ ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အတူ ယဉ်ကျေးမှုအရ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အမြစ်တွယ်နေခဲ့တဲ့ ပရဟိတစိတ်ဓာတ်ဆိုတာ ရှိနေ ပါတယ်။ သာရေးနာရေးကအစ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမှသည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအထိ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပေါ်ထွန်းလာနေတာကို ဒီကနေ့ ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ရာ တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေ၊ အသင်းအဖွဲ့တွေ စနစ်တကျဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်လာနေတာဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရှင်သန် ခိုင်မာရေးမှာ ဒီ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အားနည်းသူတွေ အကာအကွယ်ပေးရာမှာလည်း ဥပဒေနှင့်အညီ တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေ၊ အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် လူတန်းစားသမဂ္ဂ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ စနစ်တကျပေါ်ထွက်လာအောင်လည်း ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံသားများရဲ့ မူလအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်လည်း အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် များအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နှင့်အညီ လွတ်လပ်မှုနဲ့ တာဝန်ယူမှုကို မျှမျှတတ ထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်စေရန် ‘အမျိုးသားစာနယ်ဇင်းကောင်စီ’ကိုလည်း ထူထောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ စီမံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနဲ့ ပြတ်ကျန်နေရစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ခေတ်သစ် စနစ်သစ်မှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပိုမိုပေါင်းစည်းရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘိ်ုးဘွားဘီဘင်တွေ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း၊ အစဉ်အလာ၊ အနုပညာ၊ သဘင်၊ စာပေ၊ ဂီတ၊ သုခုမ အစရှိတဲ့ မြန်မာ့တန်ဖိုးတွေ ပျောက်ပျက်မသွားစေဖို့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ မြန်မာ့တန်ဖိုးမှာရှိတဲ့ ဆော့ဖ်ပါဝါကို ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းလာအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ ကြိုးပမ်းသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင် အစရှိတဲ့ မြန်မာ့တန်ဖိုးမြှင့်တင်ရာမှာ အဓိကကျတဲ့ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်း ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်သစ်စနစ်သစ်နဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းမှုတွေမှာ မြန်မာ့တန်ဖိုးတွေ ပျောက်ပျက်မသွားရအောင်၊ မြန်မာ့တန်ဖိုးတွေ ထွန်းလင်းတောက်ပလာအောင် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး ပဋိညာဉ် မူဘောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ အာဏာ (၃) ရပ်ကို အညီအမျှ ခွဲဝေပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအာဏာကြီး (၃) ရပ်ကို အညီအမျှ ခွဲဝေကျင့်သုံးပြီး စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ စာနယ်ဇင်းမီဒီယာတွေ၊ ပဉ္စမမဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ မိဘပြည်သူတွေနဲ့ တပ်မတော်တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို နားလည်မှုရှိရှိ ၊ ယုံကြည်မှုရှိရှိ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အားလုံး မျှော်မှန်းထားတဲ့ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ်ကြီးကို ရောက်ရှိ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ် လပ်ပြီး လူသားဂုဏ်ရည်မြင့်မားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင်ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် အခြေခံအကျဆုံးကတော့ ဥပဒေစိုးမိုးရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော်အရပ်ရပ်က ဥပဒေတွေ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်း၊ ဒီဥပဒေတွေနဲ့အညီ ကျွန်တော်တို့အစိုးရက အုပ်ချုပ်၊ ဒီဥပဒေတွေနဲ့အညီ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်က လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားမှာ Rule of Law ရှိရပါမယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြရာ မှာလည်း Rule of Law ရှိ်ရပါမယ်။ လူမှုဖူလုံရေးအတွက်လည်း Rule of Law ရှိရပါမယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ မှာလည်း Rule of Law ရှိရပါမယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးမှာလည်း အလားတူ ရှိရပါမယ်။ တရားစီရင်ရေးမှာလည်း အလားတူ ရှိရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့ အစည်းကြီးတစ်ခုလုံး Rule of Law နဲ့အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဆိုရင် လူ့အခွင့်အရေး ၊ လွတ်လပ်ခွင့် ၊ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာတွေဟာလည်း အလိုအလျောက် ထွန်းကားရှင်သန် လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအဆင့်ဆင့် ခိုင်မာရေးဟာ Rule of Law အပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ဒီတာဝန်ကြီးကိုလည်း ကျွန်တော်တို့အားလုံး ညီညီ ညွတ်ညွတ် စုပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ မြန်မာ့လူ့ဘောင်အဖွဲ့ အစည်းအတွင်းမှာ ရှိနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အမူအကျင့်တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်သွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပြောင်းသွားပြီ၊ စနစ်ပြောင်းသွားပြီဆိုတာကို အားလုံးက ယုံယုံကြည်ကြည် လက်ခံ နိုင်ပြီ ဆိုရင် နောက်ကြောင်းက အတွေးအခေါ်တွေ ၊ အမူအကျင့်တွေဟာလည်း အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှုနဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်းပပျောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်လုံးရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အမူအကျင့်တွေပြောင်းလဲစေဖို့ Rule of Law နဲ့ အားဖြည့်ပေးရပါမယ်။ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ၀ိုင်းကူကြရပါမယ်။ တန်းတူ ၊ သာတူညီမျှ စိတ်ထားတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုတွေရဲ့ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းမှုဟာလည်း အဓိကကျနေသလို နိုင်ငံတကာမိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ လက်ခံအားပေးမှု ၊ ကူညီ ပံ့ပိုးမှုတွေဟာလည်း အထူးပဲအရေးကြီးနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ သိသိသာသာ တိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမျက်နှာစာမှာ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အမျိုးသားရေးအကျိုးစီးပွားကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မြင့်တင် ရာမှာခေတ်အဆက်ဆက်ဖြောင့်မှတ်မှန်ကန်စွာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ပြီးတက်ကြွတဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုပဲ ဆက်လက်ကိုင်စွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအရှိန်အဟုန်နဲ့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာအရှေ့အနောက်ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးနဲ့ရင်းနှီးချစ်ကြည်စွာ ဆက်ဆံသွားမှာဖြစ်သလို နိုင်ငံတကာမိသားစုရဲ့ အားပေးကူညီမှုတွေ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ၊ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကို နွေးထွေးစွာလက်ကမ်းကြိုဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံသားတွေရဲ့အမျိုးသားရေး အကျိုးစီးပွား၊ အချုပ်အခြာ အာဏာမထိပါးစေရအောင်လည်း ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ပြီး ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာ မိဘပြည်သူများက ယုံယုံကြည်ကြည် လေးလေးနက်နက် အပ်နှင်းလာတဲ့တာဝန်တွေ၊ ကျွန်တော်တို့ကျေပွန်ရမယ့် ၀တ္တရားတွေကို ဆောင်ရွက်ရာမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကို တော်တည့် မှန်ကန်စွာခွဲဝေကျင့်သုံးပြီး အထက်အောက်တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်သိမှုတွေနဲ့ကိုယ်စွမ်း ဥာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာအခက်အခဲတွေ စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်းအများအပြား ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ခေတ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်း နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးမှာ အရေးအကြီးဆုံးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လျင်လျင်မြန်မြန် ထွက်ပေါ်လာဖို့လိုသလို ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေခိုင်မာဖို့ အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရေစီးကြောင်းမှာ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ရေစီးကြောင်းနဲ့ ပေါင်းစည်း နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ နောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ အတွင်းအပြင်သင်ခန်းစာတွေရယူပြီး အကျိုးရှိရှိ သုံးသပ်မြော်မြင် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။
နိုင်ငံတံခါးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အမျှ အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့အတူတွဲလျက်ပါလာသောစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ သတိတရားကြီးကြီးထားပြီး မဏ္ဍိုင် အရပ်ရပ်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက စနစ်တကျဖော်ဆောင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအပါအ၀င် မိဘပြည်သူအားလုံးလျှောက်လှမ်းနေတဲ့ သမိုင်းဝင် အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးဟာ အင်မတန်မှကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီးအလွန်တရာမှလည်း ခက်ခဲနက်နဲလှပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လို အသွင်ကူးပြောင်းစ နိုင်ငံတွေမှာ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအပြင် ကျွန်တော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးအတွင်းမှာ နစ်ဝင်နေတဲ့အတွင်း ဒဏ်ရာတွေကိုလည်းပျောက်ကင်းအောင် ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရသက်တမ်းအပြင်နောက်လာမယ့် အစိုးရအဆက်ဆက် လက်ထက်မှာလည်း ခိုင်မာသည်ထက် ခိုင်မာအောင်မိဘပြည်သူများအားလုံး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးက ဆက်လက်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးအောင်မြင်ပြီး ရှင်သန်ခိုင်မာတဲ့အဆင့်ရောက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်များစွာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြ ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ ယန္တရားတွေ ဒီထက်ပိုမိုစွမ်းရည်မြင့် မားလာအောင်၊ လွှတ်တော်အရပ်ရပ်ရဲ့ဥပဒေပြုမှုတွေ ဒီထက်ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်လာအောင်၊Rule of Law ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာအောင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဒီထက်ပိုပြီး စွမ်းအားကောင်းလာအောင်၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ဒီထက်ပိုပြီး မြင့်မားလာအောင် အခြေခံအဆောက်အအုံ နဲ့လူမှုဖူလုံရေးအဆောက်အအုံ တွေဒီထက်ပိုပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားလာအောင်၊ ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေရဲ့လူနေမှုဘ၀ ဒီထက်ပိုပြီးတိုးတက်မြင့်မားလာအောင် ကျွန်တော်တို့အများကြီး ကြိုးပမ်းကြရဦးမှာပါ။
မိဘပြည်သူတွေဖြစ်ချင်နေတဲ့၊ မိဘပြည်သူတွေလိုလားနေတဲ့၊ မိဘပြည်သူတွေ တစ်သက်လုံးမျှော်လင့်နေကြတဲ့ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတိုးတက်မြင့်မားပြီးစီးပွားရေးသာမက ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာ အရာရာ Rule of Law ခိုင်မာလျက်စိတ်အေးချမ်းသာစွာ၊ ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားစွာ အသက်ရှင်နေထိုင်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ မြန်မာ့လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကြီး ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီး ကြိုးပမ်းတောင်ရွက် သွားရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့မဏ္ဍိုင်တွေအနေနဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့အစိုးရကို ခိုင်ခိုင်မာမာအားကောင်းအောင် အပြန်အလှန်နားလည်မှု၊ ယုံကြည်လေးစားမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ ကူညီပေးကြပါ။ မိဘပြည်သူများကလည်း ကျွန်တော်တို့အစိုးရကို ထိန်းကျောင်းတည့်မတ်ပေးကြပါ။ အားလုံးသော Stakeholder များအနေနဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးတိုးတက်ခိုင်မာလာအောင် ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ အလေးအနက် တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့ မိဘပြည်သူများ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အရာထင်လာအောင် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဒီအချိန်မှာ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေ အလုံးစုံဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်ဖို့အထိ ကတိသစ္စာပြုထားကြသူများပီပီ အရိုးကြေကြေအရေခန်းခန်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Kai has written 982 post in this Website..
“ကုလားခပ်တဲ့ရေ ကုလားဖင်ဆေးတာနဲ့ကုန်”တဲ့ ပြင်လိုက်မယ်၊
“သူကြီးပေးတဲ့ပွိုင့်လေး သူကြီးရေးတာနဲ့ကုန်”လို့ (နောက်တာနော် သူကြီး နော်တို့ပွိုင့်တွေ မှားသလို ယောင်သလိုနဲ့ ဖျက်မပစ်နဲ့) အတော်ရေးနိုင်တဲ့လူ (သူများရေးခိုင်းလားတော့မသိ)။
စစ်အာဏာသိမ်းပြီး နောက် ၅၂ နှစ်ကြာဗမာပြည်
၁၉၆၂ခုနှစ် မတ်လ ၂ရက်နေ့တွင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကတည်ဆဲအခြေခံဥပဒေကိုသစ္စာဖေါက်ဖျက်၍တိုင်း ပြည် အာဏာကိုမတရားသိမ်းယူခဲ့သည်မှာ ယနေ့ဆိုလျှင် ၅၂ နှစ်ပြည့်နေ့ပင်ဖြစ်ပေသည်။ စစ်အာဏာရှင်စံနစ်၏အကျိုးဆက်သည်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအရှေ့တောင်အာရှ၏ ထိပ်တန်းနိုင်ငံ ဘဝမှအာရှတွင်မကကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဘဝသို့ရက်စက်စွာပို့ဆောင်ခဲ့ပေသည်။ လက်ရှိတိုင်းပြည်သမတကြီးက စစ်အာဏာရှင်စံနစ်မှဒီမိုကရေစီစံနစ်သို့ပြောင်းလဲရာတွင် အကြံဥာဏ်များလိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည့်အပေါ် တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ဖြင့်အပြုသဘောဆောင် အကြံပြုတင်ပြလိုက်ပါသည်။
(၁) သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အစိုးရသတ်တမ်းတစ်နှစ်ပြည့် မိန့် ခွန်းကိုနားထောင်ပြီး အပြုသ ဘော ဆောင်သည် ဟုယူဆပြီးအကြံပြုရေးသားတုံ့ ပြန်လိုက်ပါသည်။ဦသိန်းစိန် မိန့် ခွန်းထဲတွင် ပြည်ပနိုင် ငံများသို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်ရှိနေသူများကိုပါထည့် သွင်း၍တလေးတစားနှုတ်ဆက်စ ကားပြောကြားသွားခဲ့ သည့်အတွက်ကြိုဆိုပါသည်။ အကြံပြုချင်သည်မှာဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ အပြောတစ်ခုထဲတွင် ရပ်မနေဘဲအမြန်ဆုံးအလုပ်ပါတွဲပြီး အကောင်ထည်ဖော်မှသာမိန်းခွန်းထဲမှာပါသလို ပြည်ပ ကပညာ တတ် များရဲ့အကူအညီနဲ့ယုံကြည်မှုကို ရရှိပြီးတိုင်းပြည်ကိုေ ခတ်မမှီအောက်တန်းနောက် တန်းကျနေသည့် ဘ၀ မှအမြန်ဆုံး ကမ္ဘာ့ အဆင့် ကိုတက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ဒီအချက်ကိုအကောင် အထည် ဖော် ဘို့ ရာမှာပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများအားလုံးကို တရားဝင်ဖိတ် ခေါ်တဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့် ကို ထုတ်ပြန် ပေးဖို့လက်တွေ့ ကျကျလုပ်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။ သို့မှသာ သံသယတွေပျောက်ပြီး ကိုယ့်တိုင်း ပြည်ကိုစိတ်ချလက်ချ ပြန်လာကြပြီးဝိုင်းဝန်းဆောင် ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါသည်။
(၂) ဦးသိန်းစိန်က စံနစ်တစ်ခုမှစံနစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲရာမှာ တည်ငြိမ်မှု၊စည်းလုံးမှု ရှိရှိနဲ့ စနစ်တကျ ပြောင်းလဲရေးဟာ အရေးကြီးကြောင်းပြောကြားချက်ကိုလက်ခံပါသည်။ သို့ပေမဲ့ ဒီလိုပြောင်းလဲ ရာ မှာ စစ်အာဏာရှင်စံနစ် ၊တစ်ပါတီစံနစ်တို့ နှင့်ကျင့်သားရ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ မြန်မာ လူ့ ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက ပြည်သူတွေကို ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရတွေ သင်ကြားပေးခြင်း၊ လူ့လွတ်လပ်ခွင့် တွေကိုလက်တွေ့ ကျင့်သုံး လာသူတွေအပေါ် လိုက်လျောသီးခံခွင့်ပြုခြင်းတို့ အပြင်၊ အာဏာ အ လွန်အကျွှံ သုံးစွဲရာတွင်အကျင့်ပါနေသည့် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များကို လေးစားလိုက် နာ လာစေရန်ပညာပေးခြင်း ၊မရပါက ပြတ်ပြတ်သားသား ကြောသားရင်သားမခွဲခြား ဘဲအရေး ယူခြင်းဖြင့်၊ပြည်သူများအားငါတို့အစိုးရသည်တရားဥပဒေကို အမှန်တကယ်လေးစားလိုက်နာ သောအစိုးရဖြစ်သည်ဟုသက်သေပြနိုင်ဖို့လိုပေသည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေတွင်း ရှိ ဒီမိုကရေ စီနည်းနှင့် ဆန့် ကျင်နေသော ဥပဒေသများကို အစိုးရမှ ဦးဆောင်ပြုပြင်ခြင်း ၊ အခြားနိုင်ငံ ရေး ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များက ဒီမိုကရေစီနည်းကျ တင်ပြလာမှုကိုအတိုက်အခံများဟု သဘောမထား ပဲ တိုင်းပြည်အကျိုးကိုကြည့်ပြီး လက်ခံပေးခြင်းဖြင့် တကယ်စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီစံနစ်ဆီသို့တစ် ထစ် ပြီးတစ်ထစ် တက်လှမ်းနိုင်လိမ့် မည်ဖြစ်သည်။
(၃) ဦးသိန်းစိန်က အဓိက သူ့ တွင်ဆန္ဒ နှစ် ရပ်ကို ဖြည့် ဆည်းချင်ကြောင်း ၊တစ်ခုမှာ မြန်မာပြည်တွင်း နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားအားလုံး မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်သင့်ပါဝင် ထိုက်သူများ အားလုံးနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ ဖြစ်ကြောင်းပင်လုံစိတ်ဓါတ် အခြေခံပြီးပြုလုပ်သွားမည်။ ပြည်တွင်း စစ်ကို အဆုံးသတ်မည်ဟုပြောကြားချက်သည် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုအားလုံးနှင့်တ သဘောတည်း ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ များအားလုံး အမြန် ဆုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲ ဖို့ ကို လုပ်ဆောင်ပြဖို့ နှင့် ထောင်တွင်းအကျဉ်းချထားခြင်းခံနေရသူ တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ ဝင်များကို ချွင်းချက်မရှိ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးခြင်းသည် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် လက် တွေ့ ကျသောလုပ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်သဖြင့်အမြန် ဆုံး ပြုလုပ်သင့်ပေသည်။
(၄) ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံသည်စစ်အာဏာရှင်လမ်းကြောင်းမှ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းသို့ရွေ့ လျားစ ပြုလာနေသည်ကို တွေ့ နေရသော်လည်းသံသယဖြစ်စရာများကို တစ်ချက်တစ်ချက် တွေ့ မြင်နေရ သည်။ ဥပမာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန္တလေးတွင် တရားဟောရန် ခွင့် မပြုခြင်း အစိုးရ သတင်းစာ များက ဒေါ်စုခရီးစဉ်သည် ဆူပူမှုဖန်တီးရန်အတွက်အားယူနေခြင်း ဖြစ်သည်ဆိုသည့်တိုက်ခိုက်ရေး သားလာခြင်းတို့ သည် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းသွားနေသည်ဆိုသောလုပ်ရပ်နှင့် ဖီလာဖြစ် နေပေသည်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင်လွတ်လပ်စွာမဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ရှိခြင်းကို ယနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုအပေါ် အစိုးရအာဘော်သတင်းစာများကမနှစ်မြိုသည့်ရေးသားချက်သည် အစိုးရ၏သ ဘောကို ထင်ဟပ်သလိုဖြစ်သဖြင့်သံသယများကိုဖြစ်စေသည်။ တကယ်ပြောင်းလဲ ချင်သည်မှဟုတ်ရဲ့ လားဆို သည့် သံသယများကို ပွားများရန် လုပ်နေသူများသည်အစိုးရမှ ခန့် အပ်ထားသော ဋ္ဌာနဆိုင် ရာ များမှဖြစ်သဖြင့်သံသယ ဖြစ်ရန်လုပ်ဆောင်နေသူများကို အရေးယူခြင်းဖြင့်ပြည်သူများ၏ယုံကြည် ကိုးစားမှုကိုရရှိနိုင်ပေသည်။ အစိုးရပိုင်းတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များသည်ပြည်သူများအကြား လွတ်လပ်စွာမဲ ဆွယ်စည်းရုံးသည့်လုပ်ရပ်ကိုမမြင်ဘူးမကြားဘူးကြဘဲ အလန့်တကြားဖြစ်နေကြသည် ။နှစ်ပေါင်း၅၂နှစ်အတွင်း ယခုကဲ့သို့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆိတ်သုံးခဲ့ရသည့်အတွက်ပင်ဖြစ်သည်။
(၅) နိဂုံးအားဖြင့် ဦးသိန်းစိန်မိန့် ခွန်းတွင် မြန်မာ့ လူ့ ဘောင်အဖွဲ့ အစည်းများက အစိုးရလုပ်ဆောင် ချက်များကို မတိမ်းစောင်းရအောင်ထိမ်းသိမ်းကြပ်မတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီစနစ် ရှင်သန် ကြီးထွား လာစေရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုခြင်းသည် အလွန်အနှစ်သာရရှိသော စကားဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သော လူ့ ဘောင်အဖွဲ့ အစည်းများ ( civil society) ထွန်းကား သန်မာကြီးထွားလာရေး သည်ဒီမိုကရေစီ စနစ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကိုအားပေးခြင်းဖြစ်သလို ဒီမိုကရေစီစံနစ်မပျောက်ဆုံးစေရန်လည်းကာကွယ် ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာရန်မှာ လူထုလူတန်းစားအဖွဲ့ အစည်းများဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ရေးကို အစိုးရကိုယ်တိုင်မှ အားပေးကူညီခြင်းကို လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ လိုပေသည်။ အစိုးရသတင်းစာ များနေရာတွင် ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာများကို အစားထိုးခြင်း ၊အလုပ်သမား၊ကျောင်းသား လူတန်းစား အသင်းအဖွဲ့ များပေါ်ပေါက်လာရေးကို ခွင့် ပြုထားရုံမဟုတ်ပဲ အစိုးရမှ လူမှုရေးထောက်ပံ့ မှုကော်မရှင် တစ်ခု ဖွဲ့ စည်း၍ငွေအားလူအားဖြင့် ကူညီပံ့ ပိုးခြင်း၊နိုင်ငံခြားမှ ကူညီပံ့ ပိုးမှုကိုလမ်းဖွင့် ပေးခြင်းတို့ ကို ပြုလုပ်ပေးရန်အလွန်လိုအပ်ပေသည်။ငါတို့ အစိုးရကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဖွဲ့ စည်းထားသည်လားဟု မမြင်ပဲ ငါတို့ မလုပ်နိုင်သည့် အလုပ်များကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထပုခုံးဝင်ထမ်းကြသူများဟု ရှုမြင်၍အားပေးခဲ့ လျှင် ထို အဖွဲ့ အစည်းများသည် မိမိ လူထုလူတန်းစားများအကျိုးကို ကာကွယ်ရင်း၊ အာဏာလွန်ကျွံသုံးစွဲ သူများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့်အစိုးရ၏ တရားရေး မဏ္ဍိုင်ကို တည့်မတ်ပေးသူများ ၊(rule of law) ကို အစိုးရအဖွဲ့ စည်းအတွင်းမှ မကျင့် သုံးသူများကို ခုခံရင်း၊တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အားပေးခြင်းကြောင့် လဘ်စားမှု၊ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ယွင်းမှု ၊ အာဏာအလွဲသုံးစား ပြုမှုများပျောက်ကွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးလာ ခြင်း Rule of Law နှင့်တပြိုင်နက်မတရားဥပဒေများ ကွယ်ပျောက်ခါဒီမိုက ရေစီ လူ့ ဘောင်သို့ အမြန်ဆုံးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်စည်းစည်းလုံးလုံးဖြင့်အစိုးရ အတိုက်အခံဟူ၍ အမြင်မရှိ တော့ ပဲ တိုင်းပြည်အကျိုးကိုလုပ်ဆောင်နေသူများသာဖြစ်သည်ဟူသောသဘောထား အမြင်များ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်လိမ့်မည်ဟု သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ပါသည်။
မတ်လ (၂) ရက် ၊ ၂၀၁၂
ရေပေါ် လေ၀ဲ စပါးခွံများ (သို့) ဗိုလ်သိန်းစိန်၏ ဒီမိုဧချင်း ( ရဲဘော်ကျော်သန်း)
ဒီနေ့က ဗမာတပြည်လုံး ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျပြီး စစ်အာဏာရှင် ငရဲခန်းထဲကျရောက်ခဲ့ရတာ အနှစ် (၅၀) ပြည့်မြောက် တယ်။ ဒီနေ့မှာပဲ ၀ဲစားကြီး ဗိုလ်နေ၀င်းက ဒီမိုကရေစ်ီအစိုးရကို ဖြုတ်ချပြီး စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်။ မနေ့ကတော့ ဗိုလ် နေ၀င်း အမွေခံ ဗိုလ်သိန်းစိန်က ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်ရေး မိန့်ခွန်းတော်ကြီး ချွေသွားတယ်။ အတော်များများ အငိုက်မိ သလို ကြိုက်မိတယ် ဆိုကြတယ်။ တချို့ကတော့ အချောင်နှိုက်ဖို့ ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် အလိုက်သင့်ဟောကြ၊ ဖောကြတာပါ။
ကြိုက်မယ်ဆိုလဲ ကြိုက်စရာ၊ ဗိုလ်သိန်းစိန်က မဆလရဲ့ နောက်ဆုံး သမတ ဆိုတဲ့ စစ်ကျွန်ပညာရှင် ဒေါက်တာ မောင် မောင် လို အေးအေး အေးအေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီလေချိုလေး သွေးသွားတယ်။ ပေါက်ပေါက်ဖေါက်သလို စကားလုံး လှလှ လေးတွေ ပစ်သွားတယ်။ လူမျိုးစုတွေအရေးလဲပါ။ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ အရေးလဲမကျန် အကုန်ထဲ့ပြောသွားခဲ့တယ်။ ဒေါက်တာ မောင်မောင် တုန်းကလဲ ဒီလိုပါပဲ။ ဒီလောက်လေးမှ မစောင့်နိုင်ကြတော့ဘူးလား၊ သမဂ္ဂကြီးကို ပျော်ပျော်ပါး ပါး အုပ်မြစ်ချရအောင်ဆိုပြီး ရှေ့မှာလေချိုသွေး။ နောက်မှာ စစ်တပ်ကို အသုံးချဖို့ပြင်နဲ့ နောက်ဆုံး ဘုန်းကြီးရဟန်း မ ကျန် ပစ်သတ်နှိပ်ကွပ်ပြီး စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတယ်ဆို လုပ်သွားခဲ့တာပဲ။
သူ့မိန့်ခွန်းထဲက တောတွင်းလက်နက်ကိုင် လူငယ်လေးတွေက သူတို့လည်း ကွန်ပြူတာလက်တော့ (Lap-talk) ကိုင်ချင် တယ်ဆိုတော့ သူအတော်စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်ဆိုတဲ့ အလုံးကတော့ လူအများကို အတော်ထိ၊ တိုင်းရင်းသားတွေကို အတော်ဘ၀င်ခိုက်စေမယ့် စကားပဲ။ အရင်က သောင်းကျန်းသူ အဖျက်သမားလို့ အပုတ်ချနေသူတွေဆီ ဒီစကားမျိုး ထွက်လာတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ လူမျိုးစုပြဿနာကို အဖြေရှာရေးကြတော့ အဆင့် (၃) ဆင့်နဲ့ သွားမယ်လို့ ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်လိုက်သလို ကချင်ပြည်နယ်က တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်သွားပြန်တယ်။ သူကော ဦးစီးချုပ်ကော ရပ်ဖို့အမိန့်ပေးပါလျှက် ဘာကြောင့်များ တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေရပါလိမ့်၊ မစားရ ၀ခမန်းပါပဲ။
လက်တော့ မကိုင်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သမတကြီးက ထမင်းနပ်မှန်အောင် မစားရတဲ့ လူ ထုတွေ၊ ပညာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ ကလေးလူငယ်တွေ၊ မဝရေစာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့ တိုင်းတပါးကုမ္မဏီပိုင်ရှင်တွေရဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံ အလုပ်သမလေးတွေ၊ ကိုယ့်ဘိုးဘွား လယ်ယာတွေကို ခြံခတ်အသိမ်းခံနေတဲ့ သိန်းသန်းချီတဲ့ လယ်သမား တွေအတွက်တော့ သနားစရာ၊ ဂရုဏာ မကျန်တော့ဘူး ထင်တယ်။
လူထုလိုချင်တာက ထမင်းနပ်မှန်မှန် စားရရေးပါ၊ ဇိမ်ခံကားဈေးတွေကျတာ သူတို့ စိတ်မ၀င်စားပါဘူး၊ သူတို့နဲ့ မဆိုင်ပါ ဘူး၊ သူတို့ထမင်း သူတို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရိုးရိုးသားသား ရှာဖွေစားသောက်ခွင့်ပါ။ သူတို့ ထမင်းလုပ်ကို လုယက်နေ တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ သူတို့အပေါင်းအပါ ကုမ္မဏီတွေရဲ့ ဗိုလ်ကျမှုကို ခုခံကာကွယ်ခွင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း တိုင်း ပြည်တွေမှာ သန်းချီရှိနေကြတဲ့ ကျားမအစုံ အလုပ်သမားတွေက ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲမှာ ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေ မရနိုင် တော့လို့ သူတပါးဆီမှာ မတန်တဆလုပ်ခနဲ့ အဖိနှိပ်ခံ၊ ဗိုလ်ကျခံပြီး အလုပ်လုပ်နေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ဒုက္ခဘုံသား ပြည်သူအများအတွက်တော့ သမတကြီးရဲ့ ဂရုဏာက မရွာမစွေ ခေါင်းပါးချို့တဲ့ဟန်တူတယ်။
နောက်ရယ်ရခက် ငိုရခက်တဲ့ သမတကြီးရဲ့ စကားကတော့ Rule of law ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ အခြေခံဥပဒေပြုပြင်ရေး ဆို တာပဲ၊ မတရား ဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရတဲ့ သူတွေကိုတောင် လွှတ်မပေးနိုင်သေးဘဲ ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာတော့ သား သတ်သမား၊ ဘိန်းစား၊ မယားခိုး၊ လူလိမ်က ငါးပါးသီလပေးနေသလို ပါပဲ။ ပြီးတော့ အခြေခံဥပဒေကို လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြင်ရအောင်တဲ့။ ဒါလဲ နှုတ်သီးအရှည်ကို ပန်းကန်ပြားနဲ့ကျွေး၊ တပြန် နှုတ်သီးအတိုကို ၀ါးကျည်တောက်နဲ့ကျွေးတဲ့ မြေ ခွေးနဲ့ ငှက်ကျားပုံပြင်ထဲကလို ကျွေးတော့ ကျွေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ စားမရအောင်ကျွေးတာပဲ။
သမတကြီး နောက်ဆုံးအလေးပေး ပြောသွားတာကတော့ အရေးယူပိတ်ဆို့မှု ဆန်ရှင်တွေ ရုပ်သိမ်းပေးရေးပါ။ နိုင်ငံတ ကာက အလှူငွေတွေပေးကြပါ ဆိုတာပါပဲ။ အလှူငွေ တဒေါ်လာက ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို နောက်လှန်ကျ မသွားအောင် ကူနိုင်တယ်ဆိုပါလား။ ဒီလိုဆိုတော့ အရေးယူပိတ်ဆို့ထားတာတွေ မလုပ်ယင်၊ နိုင်ငံတကာက အလှူငွေ တွေမပေးယင်၊ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးက နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်မယ်လို့ တဖက်လှည့်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်တာများ လား။ ဗမာလူထုကြီးနဲ့ သူတို့လိုလားချက် ဒီမိုကရေစီကို အလဲအလှယ် ပြန်ပေးဆွဲခံထားရသလိုပါပဲလား၊
အော်… ဒုက္ခ .. ဒုက္ခ သံသရာဝန်လေးလှချေတကား။
နိဂုံးချုပ်ရရင် ဗိုလ်သိန်းစိန်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရွှေနားတော်သွင်း ဧချင်းက ကောင်းတော့ကောင်းပါ၏။ သို့သော်…
ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ မဆလခေတ်ဦးတုန်းက ဘုန်းကြီးတပါးက မဆလပါတ်ီရဲ့အညမည သဘောတရားစာအုပ်ကို ဖတ်မိပြီး “ကောင်းလိုက်တာ၊ ဘယ်ဘုန်းကြီးလူထွက် ရေးထားတာပါလိမ့်” လို့ ဆိုသတဲ့၊ ကောင်းမှာပေါ့ အကောင်းတွေချည်း ကူး ချထားတာကိုး၊ လက်တွေ့လုပ်ဖို့မှ မဟုတ်ဘဲ၊ ဒီလိုနဲ့ အဲဒီအကောင်းချည်း ပြပြီး ဗိုလ်နေ၀င်းတို့ ဆိုရှယ်လစ်လိုက်ကြတာ ၂၆ နှစ်လည်းကြာရော တိုင်းပြည်လဲ လူမွဲစာရင်းဝင် လူထုလဲဖွတ်ကျောပြာစု၊ ခရုဆန်ကျွတ်ဖြစ် ကျန်ခဲ့တယ်။
အခုလည်း ဗိုလ်သိန်းစိန် တို့က နတ်သံနှောလို့ တကျော့လာပြန်ပြီး။ တဒေါ်လာလှူယင် ဒီမိုကရေစီနောက်ကြောင်းပြန် မလှည့်တော့ဘူးတဲ့။ ကောင်းတော့ ကောင်းပါ၏။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မပါ၊ အပြောတွေချည်းဆိုတော့ အဆန်မပါတဲ့ ရေပေါ် လေ၀ဲတဲ့ စပါးခွံတွေလို့ပဲ မြင်မိတယ်။
Don Juan Ronald says:
တစ်ခါလိမ်ခံရလျှင်……မသိလို့ ပါဗျို့ ။
နှစ်ခါလိမ်ခံရလျှင်……အ လို့ ပါဗျို့ ။
သုံးခါလိမ်ခံရလျှင်……သေါက်သုံးမကျလို့ ပါဗျို့ ။
ကျနော်တို့ လိုအသက်ပိုင်းရှိ့ တဲ့လူရဲ့ ဘဝစဉ်တလျှောက်မှာတန်ဖိုးအရှိ့ ဆုံးအချိန်ပိုင်းသည်၊၎င်းစစ်သားတွေရဲ့ ရှက်စိတ်မရှိ့တဲ့မိုက်ကန်းအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာဖြုံးသီးခံခဲ့ရပါကလား~~~~~
မရှက်သုံးပါးကိုနောက်ထပ်တပါးပြည်သူ့ လွှတ်တွင်တိုးပေးဖို့ ၊လေးလေးနက်နက်သင်သွင်းလိုက်ပါသည်ခင်ဗျား။
ကျနော်တို့ သမတဂျီးလဲ အမေစုအသံလိုက်ယောင်နေတယ်ဗျာ။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ မိန့်ခွန်းအပေါ် ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောကြားခဲ့သည့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ အမြင်
[By Eleven Media Group ]
– သမ္မတမိန့်ခွန်းအကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင် တော်တော်ကျယ်ပြန့်လိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ အပိုင်းလိုက် ဖြေပါ့မယ်။ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းတင် မကပဲနဲ့ ၈၈မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို ခြုံငုံပြီးတော့ ဖြေပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ပြီးသားပါ။ အဓိက ကျွန်တော် ပြောချင်တာက နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ မိန့်ခွန်းကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် မယ်ဆိုကတည်းက ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ စောင့်ပြီးတော့ နားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ခြုံပြောလိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ များစွာ အပြုသဘောဆောင်တယ်လို့ ရိုးရိုးသားသားပဲ ရှုမြင်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုတာက အားလုံးပါဝင်နိုင်သော နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကျွန်တော်အဓိကထားပြီး ဆွေးနွေးပါမယ်။ သမ္မတကြီး ပြောသွားတာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် သေချာလည်း မှတ်ထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ နားလည်မှုတွေ မြင့်မားလာပြီဆိုတဲ့ ဟာမျိုးပါ။ အဲတာတွေဟာ ဘယ်အချက်တွေကို အခြေခံလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တွေးပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးတယ်။ သို့သော် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ကျန်ရှိနေတာ ကျန်ရှိနေတယ်။ တစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ စည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပေးတယ်။ သို့သော် တစ်ချို့နေရာတွေမှာ အောက်ခြေတွေမှာ အဟောင်းအတိုင်း မပြင်နိုင်သေးတာတွေ ရှိနေတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ဘက်က အပြုသဘောနဲ့ ပြန်ပြီးတော့ အသိပေးတဲ့ သဘောပါ။ နောက်တစ်ခါ သမ္မတကြီးက ပြောတယ်။ အပြန်အလှန် နားလည်ယုံကြည်မှု၊ တန်းတူညီတူရှိမှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆီကို သွားရအောင်လို့ ပြောထားတယ်။ ဒီစကားတွေဟာ အင်မတန် ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိတဲ့ စကားပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် သမ္မတတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောမယ် ဆိုရင်တောင် ရေးမယ်ဆိုရင်တောင် ဒီထက်သာတဲ့ မိန့်ခွန်းမျိုးရေးဖို့ အင်မတန်ခက်ပါတယ်။ သို့သော် တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကိုလည်း နားထောင်ကြည့်ပါတယ်။ အပြောနဲ့ မပြီးဘူးဆိုတဲ့ သတိပေးစကားမျိုး ကျွန်တော်တို့ ရပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း လက်တွေ့ကျတာကိုပဲ တန်ဖိုးထားပါတယ်။ လက်တွေ့နဲ့ တိုင်းတာရမယ့် ပေတံတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ပေါင်းများစွာ သမ္မတ အဆက်ဆက်ပေါင်းများစွာ ပြောဆိုတွေးလာတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေမှာ ဒီတစ်ခါ ဒီသမ္မတပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းကတော့ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ ကျိုးကျိုးနွံနွံ အရှိဆုံး နောက်ပြီးတော့ အနာဂတ်ကို မျှော်တတ်တဲ့ အနာဂတ်ကို ကြည့်တတ်တဲ့ ဥာဏ်အမြော်အမြင်ရှိမှုတွေ ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာတော့ မလွဲမသွေ လက်ခံရမှာပါ။
တစ်ခါ သမ္မတကြီး ပြောသွားတာ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ တိုက်တွန်းချက်နဲ့မှ မဟုတ်ဘူး၊ ဖိအားပေးချက်နဲ့မှ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားကိုလည်း ကျွန်တော် သေသေချာချာ နားထောင်ထားပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားချင်း၊ ကျွန်တော်တို့ အမြော်အမြင်နဲ့ လက်တွဲကြတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖိအား ခြိမ်းခြောက်မှုမှ မပါဘဲနဲ့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် လက်ကမ်းကြတယ်၊ လက်တွဲကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ပိုပြီးတော့တောင် ကြိုက်ပါတယ်။ အဲလိုပဲ အင်အားကြီး နိုင်ငံတစ်ခုက ဖြစ်စေ၊ အိမ်နီးချင်း အင်အားစုက ဖြစ်စေ ဖိအားပေးမှုကြောင့် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ ရှိရမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ က ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ တာဝန်ယူနေရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အထူးသဖြင့် သမ္မတလို အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း တွေကို ကျွန်တော်တို့က အားပေးချင်တာပါ။ ဘယ် အင်အားကြီး နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ ပြည်သား တွေ ညီညွတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ ရှိစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ သတင်းစကားကို ကျွန်တော် တစ်ခါတည်း ပေးချင်တယ်။ နောက်ကျန်ပါတယ်။ သမ္မတကြီး ပြောတဲ့အထဲမှာ နောင် အစိုးရ အဆက်ဆက်အထိ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေ တွေကို ခံစားကြရမယ်ဆိုတာ။ ဒါ အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ စကားပါ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဒီလိုစကားတွေ ပြောလာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အားရပါတယ်။ နောက် တည်ငြိမ်မှုနဲ့ ညီညွတ်ခြင်းက အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ တည်ငြိမ်ရေးဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော် နားလည်ထားတာက အရင်အစိုးရ အဆက်ဆက်က ပြောတဲ့ တည်ငြိမ်ရေးဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားတဲ့ တည်ငြိမ်ရေးဆိုတာကတော့ ကွာခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထားတွေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ ဖော်ထုတ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ ဖိနှိပ်မှုကြောင့် ပိပြားနေရတဲ့ ဘ၀ကို အရင်အစိုးရအဆက်ဆက်က အဲတာ တည်ငြိမ်ရေးလို့ သုံးခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ သုံးချင်တဲ့ တည်ငြိမ်ရေးဆိုတာက နိုင်ငံသားတွေဟာ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ မူလ အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ပြောဆိုခွင့် ဆိုတာကို သုံးစွဲခွင့်က တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာ ရှိနေသလို သူတစ်ပါးရဲ့ အခွင့်အရေးကို မထိခိုက်စေဘဲနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာဆောင်ရွက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေပဲ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာလည်း တစ်ပိုင်းက ရှိနေပါတယ်။
တာဝန်ယူမှုနဲ့ အခွင့်အရေးယူမှု၊ အခွင့်အရေး ရပိုင်ခွင့်ကို တွဲထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ကြတဲ့ အခမ်းအနား တွေရှိရင် လမ်းပိတ်ဆို့သွား တာမျိုး မဖြစ်အောင်၊ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု မဖြစ်အောင်၊ အပျက်အစီး အထိအခိုက် မရှိအောင်၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်သမျှ ပွဲလမ်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခမ်းအနားတွေ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာ ပြီးသွားရင် စနစ်တကျနဲ့ ပြန်ပြီး သိမ်းဆည်းသွားတာမျိုးဖြစ်အောင်၊ နောက်တစ်ခုက အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် မည်သူ့ကိုမှ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ ပွဲမျိုးမဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ဘက်က တာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ တည်ငြိမ်ရေးဆိုတဲ့ နေရာမှာ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း မထိခိုက်စေဘဲ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သုံးစွဲခွင့်ရတဲ့ တည်ငြိမ်ရေးမျိုးကို ကြိုဆိုတယ်လို့ ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ပြည်သူ လူထုရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ၀န်ခံတာကို အသိအမှတ်ပြုရမှာပါ။ အဲဒီလို အခန်းကဏ္ဍတွေ အသိအမှတ်ပြုဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကြိမ်ဖန်များစွာလည်း တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
စိန်ခေါ်မှုတွေ သံသယတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်း ၀န်ခံထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အဲဒီလို ရိုးရိုသားသား ၀န်ခံတာမျိုးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ အားပေးချင်ပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုတွေ သံသယတွေရှိနေရင် ကျွန်တော်တို့ပါ ၀ိုင်းပြီးတော့ ဖြေရှင်း ပေးကြမယ်။ ပြည်သူလူထုကို မိဘပြည်သူခေါ်ပြီးတော့ လက်ကမ်းတာမျိုးက မိဘပြည်သူတွေ ရင်ထဲမှာလည်း တော်တော် ကျေကျေနပ်နပ် ခံစားရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် လေ့လာစုံးစမ်းပြီးပါပြီ။ နောက်တစ်ခုက မျိုးဆက်အသစ် မျိုးဆက်အဟောင်းတွေ ပေါင်းပြီးတော့ နောက်ကြောင်း မလှည့်ကြည့်စတမ်း နောက်တစ်ခါ အားလုံးအတွက် သူက အင်္ဂလိပ်လိုပါ စကားလုံးသုံးထားတာပါ Common Ground ဆိုတာကို၊ အားလုံး သဘောတူညီတဲ့ အချက်အလက်တွေရှာပြီးတော့ လက်တွဲကြမယ်ဆိုတာ အဲတာတွေအားလုံး ဟာ ကမ်းလာတဲ့လက်ကို ကျွန်တော်တို့ တနွေးတထွေး ပြန်ပြီးတော့ ကြိုဆိုမှာပါ။ ဒါက အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုတဲ့ အပိုင်းကို ပြောတာပါ။
by Kyaw Thu on Sunday, March 4, 2012 at 3:40pm ·
မတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က တာဝန် ထမ်းဆောင်မှု တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြောကြားလိုက်သည့် မိန့်ခွန်းကို ကျွန်တော် ရေဒီယိုမှ နားမထောင်မိ၊ ရုပ်မြင်သံကြားမှ တိုက်ရိုက်လွှင့်မှုကိုလည်း မကြည့်ရှုမိခဲ့ချေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော ကျွန်တော်တို့ လူမှုရေးသမားများသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ နာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စသည့် ပြည်သူလူထုတို့၏ လိုအပ်ချက်၊ တောင်းဆိုချက် အကူအညီရလိုမှုတို့ကို နံနက်မှ ညအချိန် အိပ်စက်သည့် အချိန်ကာလအထိ ပေးဆပ်မှုတို့ကို နေ့တဓူဝ နားရက်မရှိ လုပ်ကိုင်ပေးဆပ်နေရ၍ ဖြစ်တော့သည်။
မတ်လ (၂) ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိလာသော မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာကို လူမှုရေးအလုပ်ရပ်နား သော ညနေပိုင်းအချိန်တွင် သမ္မတကြီး၏ မိန့်ခွန်းကို အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ရှုမိသည်။ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးနေသော သမ္မတကြီး၏ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံကို ပြည်သူလူထု တစ်ဦးအနေဖြင့် ဖတ်ရှုကာ လူမှုရေးသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့် ခံစားကြည့်မိတော့သည်။
နိုင်ငံရေးကို ကျွန်တော်ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင် ကျွန်တော် နားမလည်၊ ရွံရှာသည်။ မုန်းတီးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သိခဲ့သော နိုင်ငံရေးမှာ – ကျွန်တော်လူ့ဘဝထဲရောက်ပြီး သုံးလေးနှစ်အရွယ်တွင် ကျွန်တော်၏ မိဘဘိုးဘွားပိုင် နိုင်လွန်စက်ရုံကြီးကို ထိုအချိန်ကာလ၌ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဖြစ်ခဲ့သော ဦးနေဝင်းမှ သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်း၊ အဖိုးနှင့်အဖေတို့ကို အင်းစိန်ထောင်ထဲသို့ မတရားထည့်သွင်းခံရခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၇-တန်း ၈-တန်းအရွယ်တွင် နိုင်ငံတော်၏အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သော ကမ္ဘာ့ကုလသမ္မဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးသန့်၏ ဈာပနအခမ်းအနားမှစ၍ ဦးသန့်အရေးအခင်း။ ထို့နောက် ကျွန်တော် ၏ အဖိုးနှင့်ဖခင်တိုိ့ကို မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့သော ကျွန်တော်တို့၏ သမိုင်းကြောင်းကို ဖိနှိပ် ခဲ့သော စစ်အာဏာရှင် (မ.ဆ.လ)တို့ကို ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့သော ၈၈ အရေးအခင်းတို့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ၈၈ အရေးအခင်းကာလတွင် ကျွန်တော်သည် ဒုတိယနှစ် ရူပဗေဒနှင့် ရုပ်ရှင်သရုပ် ဆောင် လုပ်ကိုင်စဉ်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူကို လုပ်ကျွေးပြုပေးနေသူ၊ မတရားမှုကို ငုံ့မခံတက်သော စိတ်ဓါတ် တို့ဖြင့် ကျွန်တော်သည် ချီတက်ဟောပြောပွဲများတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ သို့သော် ကျွန်တော်နိုင်ငံရေး ကို မယုံကြည်ခဲ့။ မတရားဖိနှိပ်မှုကို လက်မခံနိုင်၍ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၈၈ အရေးအခင်းတွင် ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားပြည်သူ၊ ရဟန်သံဃာများ များစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော့်၏ တပည့် ဖြစ်သူ ကရင်အမျိုးသားလေး “အဘီး” တစ်ယောက်လည်း အသက်ဆုံးခဲ့ရသည်။ ယင်းနောက် န.ဝ.တ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းကို ကျွန်တော်ခံခဲ့ရသည်။ ကျောင်းသားပြည်သူများ အကျဉ်းကျ ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်သည်နိုင်ငံရေးကို နားမလည်၊ မတရားမှုကိုသာ သိရှိခဲ့ရသည်။ ယင်းနောက် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် လုပ်ကိုင်ရင်းနှင့် “အဖြူရောင်ကမ်ပိန်း” ဟုခေါ်သော အကျဉ်းကျ ကျောင်းသားများ၏ မိသားစုဝင်တို့အား လိုက်လံအားပေးနှစ်သိမ့်ကျသော လှုပ်ရှားမှုတွင် ကျွန်တော်ပါဝင် ခဲ့သည်။ ၈၈ ကျောင်းသားများ၏ ဆွမ်းကျွေးပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲတို့ကို ကျွန်တော်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကို နားမလည်။ လူသားခြင်း စာနာထောက်ထားသော စိတ်ဓါတ်နှင့်သာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ သည်ဟု ခံယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့သော သံဃာ့အရေးအခင်း (ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး)တွင် သံဃာတော်များ နေပူမိုးရွာမရှောင် ဖိနပ် မပါပဲ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့မှုတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေဖြင့် ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းမှု များပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းအတွက် န.အ.ဖ အာဏာရှင်တို့မှ ဖမ်းဆီးကာ စစ်ကြောရေးစခန်းသို့ (၈) ရက် တိုင်တိုင် ရောက်ခဲ့ရပြန်သည်။ သို့သော် ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကို နားမလည်သေး။ ဘာသာတရားကို ကြည် ညိုမှုဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့မှု၏ရလဒ်ကား အနု ပညာလောကထဲမှ ထုတ်ပယ်ခံရခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။ အချုပ်ဆိုသော် . . . ကျွန်တော်သည် နိုင်ငံရေး ကိုမသိ။ နိုင်ငံရေးကို နားမလည်၊ မယုံကြည်၊ မနှစ်မြို့၊ ရွံရှာခဲ့သည်။ ရွံ့မုန်းမိတော့သည်။
ယခု နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်မှ တစ်နှစ်ပြည့်သောနေ့တွင် အများပြည်သူတို့ ယုံယုံကြည် ကြည်နှင့် နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာကို အပ်နှင်းခံထားရသည့်အတွက် မိဘပြည်သူများကို ဦးထိပ် ထားပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုအစိုးရသည် နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက် အလှည့်အပြောင်းဖြစ်သလို အနာဂတ်သားစဉ်မျိုးဆက်များအတွက်လည်း သမိုင်းတွင်စေမည့် စတင်ခြင်းအသစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိဘပြည်သူများအတွက် ယခုကဲ့သို့ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် ဖွယ်ရာ၊ စံနမူနာ သာဓကပြုဖွယ်ရာ အောင်မြင်တဲ့ကူးပြောင်းမှုကြီးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသည် အစိုးရချည်း သက်သက်မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကြီးများ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်များ၊ မီဒီယာများ စသည်တို့အားလုံးတို့က စည်းလုံးညီညွှတ်စွာ ဦးထမ်းပဲ့ထမ်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံသားများအားလုံး နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်စတမ်း လျှောက်လှမ်းကြပြီး မတူညီတာတွေကိုဖယ် တူညီတာတွေကို ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်သွားကြမည်ဆိုပါက ဒီမိုကရေစီသည် ခိုင်မာသည်ထက် ခိုင်မာလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ သည်။ ထို့ပြင် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ် ခိုင်မာရင့်သန်လာစေရန် ခိုင်မာတောင့်တင်းသော နိုင်ငံရေးမျိုး ဆက်သစ်များလိုအပ်ကြောင်း၊ မျိုးဆက်သစ် မျိုးဆက်ဟောင်းတို့၏ စုပေါင်းစွမ်းအားနှင့် နိုင်ငံတည်ဆောက် သွားနိုင်ရေးသည် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ အနာဂတ်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ် နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည့်အတွက် ကျွန်တော်သည် နိုင်ငံရေးအပေါ် သမ္မတကြီးမှ ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားသော စကားလုံးများကြောင့် ကျေနပ်မိတော့သည်။ ဝမ်းမြောက်မိတော့သည်။ နိုင်ငံရေး ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းတို့သည် နိုင်ငံတော်ကို အုပ်ချုပ်သော နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များပေါ်တွင်သာ တည်တော့သည်ဟူ၍ နားလည် သွားတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျေနပ်မိပါတော့သည် . . . . နိုင်ငံရေး။
ကျွန်တော်စီးပွားရေးကို နားမလည်။ မကျွမ်းကျင်။ အဆုံးစွန်ဆုံးပြောရသော် ရုပ်ရှင်လောကတွင် သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ကျင်လည်စဉ်ကာလများ၌ ကျွန်တော့်အား ထုတ်လုပ်သူမှ သရုပ်ဆောင်ကြေးငွေများ ပေးသော် ကျွန်တော်ပိုက်ဆံ မရေတွက်တတ်။ ငွေကြေးကို မကိုင်ဆောင်တတ်။ ဇနီးဖြစ်သူအား အိမ်သို့ရောက်လျှင် ထိုငွေကြေးတို့ကို ထိုးအပ်၊ ငွေကြေးကွာဟမှုများဖြစ်သည့်အခါ ကွာဟ၊ လိုသည့်အခါ တွင် လို၊ ထုတ်လုပ် သူကို ပြန်ပြော၊ ပြန်တောင်းနှင့် သံသရာလည်နေခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အနုပညာမှလွဲ၍ မည်သည့် စီးပွားရေးမှ မလုပ်တတ်။ လုပ်ခဲ့ရင်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့။ ဤမျှလောက်ကို စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးကို ကျွန်တော်ရွံမုန်းခဲ့သည်။
သို့သော် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ မိန့်ခွန်းထဲတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်များ၊ သွင်းကုန်ပို့ကုန် လိုင်စင်များ၊ ပို့ကုန်နှင့်ပတ်သက်သော အခွန်အခများကို လျှော့ချဖယ်ရှားပေးခဲ့ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်မှု နှုန်းထားများ ပြောင်းလဲပေးခြင်း၊ ဆန်စပါးတင်ပို့ခွင့်များ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ စက်သုံးဆီ၊ တယ်လီဖုန်း၊ မော် တော်ကားဈေးနှုန်းများကို ကျဆင်းလာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်း၊ အများပိုင်ကုမ္ပဏီများ တိုးပွားရှင်သန် စေခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများတိုးမြင့်ပေးခဲ့ခြင်း၊ ပြည်တွင်း/ပတတ်သိပညာရှင်များ၏ တန်ဖိုးကြီးမားသော အကြံဉာဏ်များကို အလေးအနက်ထားပြီး ပြည်သူလူထုတို့၏ စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ယခင် မ.ဆ.လခေတ်က ပုဂ္ဂလိကပိုင် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများကို အစိုးရပိုင်အဖြစ်သိမ်းပိုက်ခဲ့သော်လည်း ယခု ဒီမိုကရေစီ အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲမှုကို လူတစ်စု လက်ဝယ်သို့ မရောက်ရှိစေရန်၊ မညီမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုကို အဟန့်အတားမဖြစ်စေ ရန် အဘက်ဘက်မှ သုံးသပ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းများကို ကြားသိရ၍ စီးပွားရေးကို ကျွန်တော် ကျေနပ်မိ ပြန်တော့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျေနပ်မိပါတော့သည်. . . စီးပွားရေး။
ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြန်တော့လည်း ကျွန်တော် နားမလည်။ မတတ်ကျွမ်း။ မ.ဆ.လခေတ်တွင် ကြီးပြင်းလာသူတစ်ယောက်အနေဖြင့် ပညာရေးဆုံးရှုံးမှုများထဲတွင် တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပညာရေးအစမ်းသပ်ခံ လူသားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးနှစ် ရူပဗေဒနှင့် ကျောင်းထွက်ခဲ့သည်။ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများလည်းမရ။ အဂ္ဂမဟာဘွဲ့၊ သရေစည်သူဘွဲ့တွေ ဆိုရင် ဝေးရော ပေ့ါ။ ပညာရေးကို အဲဒီလို ကျွန်တော်မုန်းခဲ့။ စိမ်းကားခဲ့သည်။
သို့သော် ယခုသမ္မတကြီး၏ မိန့်ခွန်းမှာ တက္ကသိုလ်တွေ စာသင်ကျောင်းတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ ခေတ်စနစ်နှင့်ညီတဲ့သင်ရိုးညွှန်းတန်းတွေကိုသာမကစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးကိုပါ ဒွန်တွဲဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များတွင် သမားရိုးကျ စာကြည့်တိုက်များအပြင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်ကြီးများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်များ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆရာ/မများ၏ အရည်အသွေးမြှင့်မားရေး လက်တွေ့ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ ကွန်ယက်များမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေးများကို လုပ်ဆောင်ပေးမည့်အပြင် “သေနတ်ကိုင်သောလက်များကို လက်တော့ပ်ကိုင်သော လက်များအဖြစ်ပြောင်းပေးမည်” ဟူသော သမ္မတကြီး၏ မိန့်ခွန်းစကားအရ ပညာရေးဟူသော စကားလုံးအား ကျွန်တော်ချစ်ခင်မိသည်။ မြတ်နိုးမိ တော့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျေနပ်မိပါတော့သည် . . . ပညာရေး။
ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော် မကောင်းမွန်လှ။ နေ့တစ်မျိုး ညတစ်မျိုးဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော်၏ ကျန်းမာရေးမှာ ဂဏန်းမငြိမ်လှ။ အများပြည်သူ၏ မေတ္တာပို့မှုများကြောင့် အသက်ခန္ဓာ မြဲနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်မိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ကျွန်တော်ကြောက်သည်။ ရွံ့သည်။
သို့သော် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ မိန့်ခွန်းတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော မိဘပြည်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လူသားဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်တွင်း/ပ များတွင်ရှိသော ပုဂ္ဂလိက၊ NGO၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကူအညီကိုရယူပြီး ကုလသမ္မဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး ၏ ထောင်စုနှစ်ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူများ၏ အခြေခံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ယူနီဗာဆယ်ကျန်းမာရေး အာမခံစနစ်သစ် ပေါ်ထွန်းလာရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ လာမည့်နှစ်တွင် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၌ နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာငွေကို ယခင်နှစ်များထက် လေးဆတိုးမြှင့်သုံးစွဲမည်ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သော ကြောင့် ကျွန်တော် နေကောင်းသလိုလို ဖြစ်သွားသည်။ ကျွန်တော်သည် . . . ကျန်းမာရေးကို မြတ်နိုးမိတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျေနပ်မိပါတော့သည် . . . ကျန်းမာရေး။
ဟုတ်ကဲ့။ လူမှုရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်ထဲထဲဝင်ဝင် သိထားသည်။ လူမှုရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထုံးလိုမွှေ ရေလိုနှောက်ထားသူဖြစ်သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစပြီး နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် လုပ်ကိုင်ပေးဆပ်ခဲ့ရာ ယခုဆိုလျှင် (၁၂)နှစ်တာ ကာလတွင်းသို့ ရောက်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ မိမိ၏ အနုပညာလုပ်ကိုင်မှုအချိန်များကိုဖဲ့ယူ၍ ပေးဆပ်ခဲ့ရာမှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှစ၍ ယနေ့တိုင် အနုပညာလုပ်ငန်းများ လုပ်ခွင့်မရှိတော့ပါသဖြင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပေးဆပ်မှုပေါင်းများစွာကို မြတ်စွာဘုရား၏ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးကို လက်ကိုင်ပြုခဲ့ကာ အများပြည်သူ တို့ကို ကူညီဖေးမပေးဆပ်ခဲ့သော နာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ သဘာဝဘေးဒဏ် ကယ်ဆယ်ရေး တို့ကို ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်ကိုင်နားလည်ခဲ့တော့သည်။
သမ္မတကြီး၏ မိန့်ခွန်းတွင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရှင်သန်ခိုင်မာရေးမှာ အရပ်ဘက်လူ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိကြောင်း အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ခိုင်မာ အားကောင်းလာရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဟာ ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမနဲ့အတူ ယဉ်ကျေးမှုအရ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အမြစ်တွယ်နေခဲ့တဲ့ ပရဟိတစိတ်ဓါတ်များနှင့် အရှိန်အဟုန်မြင့်စွာ လုပ်ကိုင်လာရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းကိုလည်း ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် ဤတစ်ကြိမ်တွင်တော့ လူမှုရေးကို ထဲထဲဝင်ဝင်သိရှိလုပ်ကိုင်ပေးဆပ်နေသော ကျွန်တော့်အဖို့ သမ္မတကြီး၏ လူမှုရေးစကားလုံးများကို ကြားသိရသောအခါ ကျွန်တော်သည် “လူမှုရေး” ကို အထူးကြောက်ရွံ့မိတော့သည်။ အထူးတုန်လှုပ်သွားတော့သည်။
ထို့ကြောင့် ကြောက်ရွံ့မိပါတော့သည် . . . လူမှုရေး။
အဘယ့်ကြောင့်ဆို . . . ကျွန်တော်တို့သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစ၍ နာရေးကူညီမှုတည်းဟူသော နာရေးရှင်တို့၏ အပူမီးများကို ငြိမ်းသတ်ပေးသော နာရေးကူညီဖေးမမှုတို့ကို (အခမဲ့) လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ပထမပိုင်းတွင် တစ်နေ့လျှင် နာရေးပေါင်း (၅) ဦးခန့်မှ ယခုဆိုလျှင် တစ်နေ့လျှင် (၄၅) မှ (၅၀) ဦးခန့် (အခမဲ့) သင်္ဂြိုလ်ပေးနေရပြီဖြစ်သည်။ ဘဝကူးပြောင်းမှုများ မြင့်မားလာမှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်သော ဆင်းရဲနွမ်းပါး၍ ဆေးဝါးမကုနိုင်ခဲ့ခြင်းကို သိရှိခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ ခွဲစိတ်ကုသမည့် လူနာများ၊ ခွဲစိတ်မွေးဖွားမည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များကို ခွဲစိတ်ခ အကုန်အကျခံခွဲစိတ်ပေးခြင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း ဟူ၍ (အခမဲ့) ဆေးဝါးကုသမှုတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ တစ်နေ့လျှင် လူနာ (၂၀) ခန့်မှ ယခုဆိုလျှင် တစ်နေ့လျှင်လူနာ (၂၀၀)ယောက် ကျော်ခန့်ကို (အခမဲ့) ကုသပေးနေရပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှု ဘာကြောင့်ယခုကဲ့သို့ မြင့်မားလေသနည်းဟု စဉ်းစားကြသော် အသိပညာနည်းပါးမှု၊ ဗဟုသုတခေါင်းပါးမှုတို့ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် သုခအလင်း စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာ နွေရာသီသင်တန်း၊ အဆင့်မြင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း များ၊ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း၊ ကွန်ပြူတာသင်တန်းများ၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းများ စသည့် လူ့ကျင့်ဝတ်ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာပေးသင်တန်းများကိုပါ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့်က နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရာတွင် ကလေးငယ် (၂၀၀) ခန့် တက်ရောက်ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ် နွေရာသီသင်တန်းအတွက် စာရင်းလာရောက်ပေးသူ ကလေးပေါင်း (၁၀၀၀) နီးပါးခန့်ရှိခဲ့သည်။ လူမှုရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ယခုအချိန်အထိ နာရေးကူညီမှုပေါင်း (၁၁၂၃၀၃)၊ ဆေးဝါးကုသပေးမှုပေါင်း (၁၅၀၆၃၁)၊ ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ (၁၀၀၀၀) ဦးခန့် ကူညီဖေးမ ပံ့ပိုးမှုများကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်ကိုင်ပေးပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အနေဖြင့် သမ္မတကြီး ပြောကြားသွားသော လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ နာရေး၊ သဘာဝ ဘေး ကယ်ဆယ်ကူညီထောက်ပံ့ရေး စသည့် လူမှုလုပ်ငန်းများကို နှစ်အလိုက်၊ ခေတ်အလိုက် ဆထက်တန်ဖိုး တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ပေးဆပ်ရန်သာ ရှိတော့သည်။
သို့ရာတွင် ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အပြင် အခြားလူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးအသင်းများအတွက် တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်ဝယ်သို့မရရှိသေးပါ။ နေပြည်တော်မှ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက် ထုတ်ပေးလိုက်ပြီဟု ဖြစ်သော်ငြားလည်း ပြည်နယ်၊ တိုင်း၊ မြို့နယ်ဋ္ဌာနဆိုင်ရာများမှ ယနေ့တိုင် ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း မရှိသေးချေ။ ထို့ကြောင့် သမ္မတကြီးမိန့်ကြားခဲ့သော ဖောင်ဒေးရှင်းများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်လာတာ ဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ကြောင်း၊ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ဒီမိုကရေစီရှင်သန်ခိုင်မာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိကြောင်းဟု မိန့်ဆိုငြားသော်လည်း ကျွန်တော်တို့ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များအတွက် ယခုတိုင် မှတ်ပုံတင်မရခြင်းသည် သမ္မတကြီးနှင့် ပြည်နယ်၊ တိုင်း၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်တို့ ချိတ်ဆက်မှုများလွဲနေပြီလားဟု ကျွန်တော်တွေးမိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လူမှုရေးသမားများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များအနေနှင့် အစိုးရအသိအမှတ်မပြုသော တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် ပြည်သူလူထုတို့အား ကူညီဖေးမမှုတို့ကို အကြောက်တရားနှင့် ယှဉ်တွဲကာ ကုသိုလ်ရေးကို လုပ်ကိုင်နေရသောသူများပမာ ဖြစ်နေတော့သည်။ ဤတွင် သမ္မတကြီး၏ မိန့်ခွန်းများကို ကျွန်တော်ထပ်ခါထပ်ခါ ဖတ်ရှု၍ တွေးတောစဉ်းစားမိတော့သည်။ “ငါသာလျှင် သမ္မတကြီးဖြစ်ရင်တော့” ဟူ၍ တွေးတောစဉ်းစားမိတော့သည်။
ဟုတ်ပါသည်။ “နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးကျော်သူ” ဟူ၍ အတွေးထဲဖြစ်ပေါ်သွားတော့သည်။ ကျွန်တော်သာ သမ္မတကြီးဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ် ချီတက်ရာတွင် ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ငြိမ်းချမ်းသော နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာအောင် ပြည်သူလူထုအားလုံး ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ကိုယ်ကျင့်သီလ စိတ်ဓါတ်များကို ပထမဦးဆုံး ပြုပြင်ရမည်။ အောက်ခြေလူတန်းစားများဖြစ်သော ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ပြည်သူလူထုတို့၏ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ နာရေး စသည့်ကိစ္စရပ်များကို အဆင်ပြေ ချောမွတ် အောင် လုပ်ဆောင်ရမည်။ ထိုသုိ့လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပြည်သူလူထုထဲသို့ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်များအတွင်းသို့ ထဲထဲဝင်ဝင် ကွင်းဆင်းလေ့လာရန် မလိုချေ။ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် အာဏာပိုင်များ၏ သတင်းပို့သချက်များ ထက် ပိုမိုတိကျမှန်ကန်သော ဖြစ်ရပ်များကို သိရှိရန် အရေးကြီးသည် မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူလူထု တို့၏ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးတို့ကို အနီးကပ်ပံ့ပိုးကူညီ ဖေးမပေးနေသော မြို့နယ်အလိုက်၊ တိုင်းအလိုက် ဖွဲ့စည်းထားသော လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် တစ်နာရီခန့်သာ တွေ့ဆုံလိုက်ယုံသာ ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ယင်းလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၏ အများပြည်သူတို့အပေါ် ကူညီ ပေးရမှုများကို အခန်းကဏ္ဍအလိုက် ရာခိုင်နှုန်းများနှင့် လိုအပ်ချက်များကို သိရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ မည်ကဲ့သို့ ပြည်သူလူထုတို့၏ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးတို့ကို ခိုင်မာလာအောင် လုပ်ဆောင် ပေးသင့်သည်ကို တိကျသော အဖြေရရှိမည်ဖြစ်တော့သည်။ အောက်ခြေပြည်သူလူထု ခိုင်မာပါမှ ဖောင်ဒေးရှင်းခိုင်မာသော မိုးထက်မြင့်သော ဒီမိုကရေစီတိုက်တာကြီးများ ပေါ်ထွန်းလာမည်ဟု တွေးမြင်မိ တော့သည်။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်ရာတွင် အောက်ခြေ ပြည်သူလူထုတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ကူညီပေးနေသော လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များအား အမြန်ဆုံး တရားဝင်မှတ်ပုံတင်များ ချမှတ်ပေးပြီးသည့်နောက် မိဘပြည်သူတို့၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ နာရေး စသည့် လူမှုကိစ္စများကို ခိုင်မာလာအောင် ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ရေးအတွက် သမ္မတကြီးပြောကြားသော စကားအရ အပြန်အလှန်နားလည်မှု၊ ယုံကြည်လေးစားမှုတို့နှင့်အတူ ပြည်သူ့အကျိုး တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ သယ်ပိုး နေသော တိုင်း၊ ပြည်နယ်အလိုက် ဖွဲ့စည်းထားသော လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များသို့ သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်း၍သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှု လည်ပတ်မည်ဆိုပါက ပြည်သူလူထုတို့ ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲ အကျပ်အတည်း အနှောက်အယှက်များကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရပြီး အချိန်တိုတို အတွင်းမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အရာထင်လာမည်ဟု သမ္မတကြီးအတွေးမျိုးနှင့် ကျွန်တော်အတွေး နယ်ချဲ့ကာ အိပ်ပျော်သွားတော့သည်။
ထိုညက ကျွန်တော်အိပ်မက်မက်သည်။ နံနက်အာရုံတက်တွင်မက်သော အိပ်မက်ဖြစ်သည်။
“သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ကို လာသည်” ဟု။
အာရုံတက်တွင်မက်သော အိပ်မက်သည် ဒဲ့ထိအောင် မှန်သည်ဟု အဆိုရှိပေသည်။
အမလေးနော် မပြောလိုက်ချင်ဘူး ဘယ်သူရေးတာက ပိုများလဲဆိုပြီး ပြိုင်နေကြသလားအောက်မေ့ရတယ်
တကယ်တည်းပြောလိုက်ချင်ဘူး………..ဖတ်လိုက်ရတာကိုမှာ နတ်ဆိုးလေး မျက်မှန်းတတ်ရရင်တော့ ဒင်းတို့ သိမယ်ဒါဘဲ………….